Andriamasinavalona dia mpanjakan'Imerina nanomboka ny taona 1675. Andriantsimitoviaminandriandehibe no rainy, ary Rafaravavy no reniny. Andrianjakanavalondralambo na Ralambonandriantsimitovy no anarana nentiny fony izy andriantompombodivona tao Alasora, nanoa an-dRazakatsitakatrandriana zokiny, izay nandimby an-drainy nanjaka tao Antananarivo. Avy amin'ny anarany no nipoiran'ny sokajin'andriana atao hoe Andriamasinavalona, izay ahitana ny ampahan'ny taranany sy ny havany ary olona avy any ivelan'ny foko misy azy.
Tsy nanongana sy nandroaka an-jokiny teo amin’ny fitondrana izy, fa ny vahoaka araka ny hevitra sy ny teti-kadin’Andriamampandry hovalahy mpanolontsaina no nahatonga izany.
Nisy 12 vavy ny vadin’Andriamasinavalona, vokatry ny famoriam-panjakana, ary niteraka 9 lahy sy vavy maromaro izy. Samy tiany hahazo anjara fitondrana kely tsirairay teo amin’ny fanjakana na ny zanany naterany na ny zanaky ny iray tampo aminy ka nahatonga ny fanjakana « menakely » ho marobe. Andrianambonimena, zanak'anabaviny tao Alasora no notendreny handimby azy ho eo amin'ny fanjakana. Anefa, i Andriantomponimerina, zanany tao Ambohidratrimo no nanondrana ka nitana babo an-drainy fotoana maro hanereny azy hanome ny fanjakan’Imerina manontolo. Afaka ihany anefa izy ka afaka niverina nody tao Antananarivo, renivohitry ny fanjakany. Niamboho sy nafenina tao Antananarivo izy tamin'ny taona 1710.Heverina ho naharitra 100 taona ny andro niainany.
1.3 Ny namoriana an'Imerina
1.3.1 Andriamasinavalona, olon'ny fihavanana.
1.4 Ady amin'ny mosary sy ny asa fampandrosoana
1.5 Ny fiandrianana sy ny hasin'ny andriamanjaka
2.1 Ny ambaratongan'ny havan'andriamanjaka
2.1.1 Ny fomba sy ny zon’ny andriana teto Imerina amin’ny ankapobeny
3.3 Ny taranak’Andriamasinavalona
3.4 Ny taranaka sy ny zanak’anabavy ary ny zana-drahalahin’Andriamasinavalona
4 Ny zo sy satan'ny Andriamasinavalona
5.2 Ny Andriamasinavalona, zanak’Andrianentoarivo
5.3 Ny Andriamasinavalona amin’ny Vakinankaratra
Andriamasinavalona no mpanjaka faha-9 taorian’ny nanjakan-dRangita, ilay andriambavy nanorina ny fanjakana merina voalohany. Izy dia zafiafin’Andrianjaka (1610-1630), ilay mpanjaka nanorina ny renivohitra Antananarivo ary raiben’ny raiben’Andrianampoinimerina (1785-1810).
Teraka ny tsinambolan’ny Alahamady toa an-dRalambo razambeny izy; Andrianjakanavalondralambo na Ralambonandriantsimitovy no anarana nentiny fony izy tompom-bodivona tao Alasora, nanoa an’Andrianjakatsitakatrandriana zokiny, izay nandimby an-drainy Andriantsimitoviaminandrianandehibe, mpanjaka tao Antananarivo.
Rehefa nanjaka izy dia naka ny anarana hoe Andriamasinavalona (izany hoe: « andriana manana ny hasina, harena voatahiry sy navalona hataramin’ny ela »).
Andriamasinavalona no isan’ny andriamanjaka nalaza teto Imerina, fakana tahaka satria nahay nifandray sy niahy ny soa ho an’ny olony, tia ny zanany sy ny havany ary ny vahoakany, nanam-panahy ka mamy hoditra tamin’ny olon-drehetra ary tena nampihatra ilay fiteny hoe: « Ny fanahy no olona ». Feno fahendrena izy tamin’ ny fitondrana ny tany, nanana ny hatsaram-po teo amin’ny fifandraisana amin’ny vahoakany.
Tsy lefona na basy aman-tafondro no nentiny namory ny fanjakana merina, fa ny fahaizany nifandray tamin’ny mponina: Andriamanjaka nahay niara-nidinika amin’ny vahoakany ny ho soa teo amin’ny fanjakany, sy ny ratsy tokony ialana.
Rahefa niamboho Andriantsimitoviaminandriandehibe dia ny zanany lahimatoa Andrianjakatsitakatrandriana aloha no nanjaka nandimby azy tao Antananarivo fa Andrianjakanavalondralambo zandry olona dia nampanoavina teo Alasora nanaraka ilay didy fandovam-panjakana atao hoe « fanjakana arindra » ka ny zokiny aloha no manjaka, vao izay mandimby ny zandriny, fa hoy rainy taminy: « Zandrin’olona, fa mahandrasa; kanefa na izany aza, aza malahelo foana fa lahy, lehitsy ! »
Rehefa tao anatin’ny fahoriana toy izany ny vahoaka, dia nisy loholona hendry, Andriamampandry no anarany, hovalahy avy amin’ny Zafimbazaha Dilambato, fa teny Andraisisa no nipetraka.
« Izaho, hoy izy, handeha hamangy andriana ! »
Rehefa tonga tao amin-dRazakatsitakatrandriana tao Antananarivo izy dia nanontany hoe:
« Ka fo firy ny foko fa tsy ho tokana ihany ! »
« Eny lahy, fa tokam-po Razakatsitakatrandriana ! »
, hoy Andriamampandry.
« Ry zanakandriana ô ! Firy moa ny fonao ? »
« Fo firy ny foko ? fa fo roa , fo telo ! »
Ny sasany naka ny fo tokana, ny hafa naka ny fo roa.
« Ela loatra izany, hoy Andriamampandry, fa ny fo tokana hamono izy dia izy irery no manapaka tsy miera,hamelona izy dia izy irery no miera; fa ny fo roa, hamono, miera amin’ny vahoaka, misy soa holazaina, miera amin’ny vahoaka ! »
Dia ny fo roa no nalain’ny vahoaka. Lasa ary Andriamampandry hikarakara ny raharaha, fa nony teny an-dalana dia notsenain’Andriamanalina, olon-kendry iray nataony hoe:
« Aza miteny ianao fa alao hanaovako azy ! »
« Mandre ve ianareo ? Avoahy Razakatsitakatrandriana ! »
Dia hoy ny tao an-tanàna:
« Ahoana no amoahana ny andriana ! »
« Raha mankeny Andemaka, alemahon’Andriamanitra ! Mankeny Volasarika, sarihon’Andriamanitra ! Mankeny Ambodikongona,kongonin’Andriamanitra ! Mankeny Ambanidia, mbiaza ambany dian-dRazakanavalondralambo Razakatsitakatra ! » Nakopany ny lambany dia lasa izy.
hoy Andriampanihiany, tsindranolahy. Dia hoy Andriamampandry:
« Izao no sikidinao, Tompokolahy, fa nozonin’ny olona ianao: mankanesa any Anteza ianao. »
Dia nankany Anteza tokoa Razakatsitakatra, ary dia niala teny Alasora Razakanavalondralambo; nifindra nankeo Ambodivoanonoka, Antsahondra, Ambatobevanja, Razakatsitakatra, ary niampita nankeo Ambohipo, dia teo Ambatoroka ary Faliarivo Razakanavalondralambo; tonga teo Avaratr’Andohalo, Razakatsitakatra, fa Razakanavalondralambo kosa tonga tao Anatirova Antananarivo, nohobin’ny vahoaka ka naka ny anarana hoe Andriamasinavalona.
Nodoran’Andriamapandry ny tranony teo avaratra Andohalo, ka lao Razakatsitakatrandriana ary niloa-bava hoe « Mamitaka ! », lasa nivalana nikandrefana nihazo an'Antsakalava.
Ilay toerana naharesen’Andriamasinavalona an-dRazakatsitakatrandriana dia natao tsy azo alehan’ny andriana na ny entan’andriana, fa fady ka natao hoe Ambohimanoro, satria misy olana mijoro eo manoro ny làlana tsy azo aleha mianavaratra na miakandrefana.
« Iny ny basy iray, lefona efatra, ento hiarovanareo tena, ary iny ny vola iray kitapo (20 piastra) hataonareo vatsy sy hivelomana any amin'izay toerana tianareo. »
Nahita izany Andrianjakatsitakatrandriana dia nitodika niantsinanana nivavaka tamin’Andriamanitra Andriananahary sy ny razana, nisaotra sy nitso-drano an-jandriny ho ela fanapahana, ho tratr’izay ela indrindra. Feno herim-po vaovao indray izy mianakavy nanohy ny dia niankandrefana ho any Antsakalavan’ i Boina.
Toy izany no fanehoan’Andriamasinavalona ny fahendreny sy ny hatsaram-panahiny, fa na dia nanana ny fahefana tsy refesi-mandidy aza izy, dia nanao am-po fa vonona mandrakariva hiera amin’ny vahoaka aloha vao mandray fanampahan-kevitra ary tsy mba nanenji-dresy izy. Tsy izy no nanongana sy nandroaka an’Andrianjakatsitakatrandriana zokiny teo amin’ ny fitondrana, fa ny vahoaka, araka ny hevitra sy ny tetikadin’Andriamampandry hovalahy mpanolontsaina.
Ny faritry ny fanjakana nolovainy tamin’Andriatsimitoviaminandriandehibe rainy dia kely velarana ihany satria tsy nihoatra ny tendrombohitra Andringitra ny avaratra-andrefana, Angavokely ny farany antsinanana, Alasora sy ny Zanamihoatra ny atsimo, ary ny henihenin’ i Betsimitatatra ny andrefana. Mbola nizarazara fanjakana madinika maro ny firenena merina fahiny, na dia teo ihany aza ny fanjakan’Antananarivo izay tsy nanampahefana firy tamin’ ireo mpanjaka madinika na tompomenakely nipetraka am-bodivona: nisy mpanjaka tany Amoronkay-Ifanongoavana (Andriampanarivofonamanjaka), tany Manohilahy avaratra (Andriamasinteny), tao Ambohitrimanjaka-Anosivato (Andriamanjakatokana), tao Ambohijoky, tany Itsinjoarivo, amoron’ Ionive (Andriandanitramantany), sns… Tsy nandry fehizay noho izany ny tany; betsaka ny ady an-trano, noho ireo fanjakana kely madinika nifandrafy; nanjaka ny asan-jiolahy, ny fisakanana sy ny halatra olona hatao andevo hamidy amin’ny mpijirika vazaha, na Arabo. Nitaintaina tsy nandry mandry isan’andro ny fianakaviana, indrindra ny zaza amam-behivavy sao misy manafika. Mba henoy ange ity tantara ity e:
Raha niainga hono avy any Ifanongoavana (atsimon’Imantasoa ankehitriny) Andriampanarivofonamanjaka hanatona an’Andriamasinavalona aty Antananarivo dia nitondra vatan-dehilahy 7 matanjaka; nentiny niaraka tamin’ izy ireo koa ny vady aman-janany fa:
« Satria raha ajanonay aty ny vady aman-janakay tsy manaraka anay, hoy izy 7 lahy, sao entin-dry zalahy any amin’ny Ontaiva, Bezanozano, baboiny ka very izahay ! »
Dia niainga izy ireo ho aty Antananarivo ka roa andro teny an-dalana ihany, fa alina no mandeha fa sao samborin’ny sasany amin’ny antoandro eny an-dàlana fa tsy mandry ny tany, miady an-trano.
Nandry tsy lavo loha lalandava ny mponina, mitady fiarovan-tena fotsiny fa tsy nahavita asa famonkarana firy intsony; nananontanona lalandava ny mosary; nivelona tamin-tebiteby sy tahotra ny vahoaka. Noho izany, ny lahasa noraisin’Andriamasinavalona voalohany dia ny fitadiavana ny fandriampahalemana hampiadana ny vahoaka sy fahafahan’ izy ireo miasa sy miaina am-pilaminana. Ny hevitra hitany hanatanterahana izany dia ny famoriana ireo fanjakana madinika manoddidina an’Antananarivo mba ho eo ambany fahefany tokana sy ny famaritana mazava ny fanjakany; amin’ izay dia afaka miaro azy ireo izy ary afaka mametraka lalàna tokana mifehy ny ambanilanitra sy manaramaso azy akaiky.
Ny namoriana an'Imerina[hanova | hanova ny fango]
Andriamasinavalona, olon'ny fihavanana.[hanova | hanova ny fango]
Tsy ny fanitaram-pahefana hampisehoana voninahitra sy hery no notadiaviny fa ny fiadanan’ny vahoaka Merina hampandry mandry ny zaza ama-behivavy sy hampiadana ny fianakaviana . Tsy tamin’ny basy aman-defona na tamin’ny ra latsaka intsony no namoriany ny fanjakana satria hanampy trotraka indray ny fahorian’ny vahoaka izany, fa tamin’ny teny mamy, fandrindram-pihavanana amin’ny alalan’ny fanambadiana indrindraindrindra . Voalaza fa nisy 12 ny isan’ ny vadin’Andriamasinavalona; tsy haitraitra izany na fieboeboana sy fanehoam-pahefana mihoa-pampana hanao fitondran-dehilahy fotsiny fitia te-hampirafy, fa fanambadiana ara-pitondrana nentina nampandry tany sy nanitarana fanjakana. Ary azo heverina fa nisy fifanarahana ihany angamba natao tamin’ireo mpanjaka nanome ny zanany vavy na ny anabaviny ho vadin’Andriamasinavalona nifanomezana toky fa handova fanjakana ny zaza haterak’izy ireo any aoriana. Tahak’izany ireo mpanjaka niditra ho vinanton’ny andriamanjaka, izay nanao fifanekena fa izy ireo dia hipetraka eo amin’ny fanjakany ihany na dia eo ambany fahefan’Andriamasinavalona aza, ary ny taranany dia ho zanak’Andriamasinavalona ihany koa.
Nisy fifanekena na velirano natao tamin’izany ho fanamafisana ny fifanarahana ka nomarihiana tamin’ny fananganana orim-batom-panoavana sy fihavanana manao hoe: « Andriamasinavalona no Andriamanjaka tokana tompoina, omena ny hasina sy manana ny fahefana eto Imerina; fa ho tambin’ny fanambadiana kosa, dia tsy ho very fananana akory izy ireo fa hanjaka zanaka aoriana ! »
Ka ny nanombohany izany asa izany dia tany amin’iny tapany atsinanana-atsimon’Imerina iny, Amoronkay, izay nisy tompomenakely nitovy fijery taminy amin’ny fiahiana ny vahoaka. Tsy iza io fa Andriampanarivofonamanjaka, mpanjakan’Ifanongoavana sy Amoronkay, izay nandefasany iraka nilazany ny hetahetany. Nahita izany Andriampanarivo dia namory an’izy fito lahy loholona sy ny mpisikidy nitady hevitra amin’izao ataon’Andriamasinavalona izao fa andriamanjaka lehibe izy, manan-daza sy manam-panahy. Rahefa nivory dia tapa-kevitra Andriampanarivofonamanjaka sy ny vahoakany fa hiakatra aty Antananarivo hanolotra ny fanjakany ho an’Andriamasinavalona.
Tonga soa aman-tsara teto Antananarivo ka nangataka fihaonana tamin’ny andriamanjaka izy ireo. Rehefa avy niarahaba andriana dia niteny Andriampanarivofonamanjaka fa tonga hanaiky sy hanoa ary hanatanteraka izay sitrapon’ny mpanjaka. Faly sy nankasitraka Andriamasinavalona ka nampanaovina velirano Andriampanarivo sy ny mpiara-dia aminy.
Dia hoy Andriamasinavalona:
« Dia omeko ny mahatoky anao kosa ianao fa efa nahafoy ny tenanao raha tsy izaho no Andriana;dia omeko ho vadinao ny anabaviko hanaovanao ahy hoe Rafozako, sy hanaovako anao hoe Vinantoko, tsy hovan-taranaka mandrakizay ! »
Ka nomeny ho vadin’Andriampanarivo ny anabaviny Ranavalontsimitoviaminandriana ary hoy izy nanafatra:
« ..Mandehana mody ianareo mivady, ampandrio ny tany, ampandrio ny fanjakana ary ambarao izao ny vahoaka: aza matahotra, aza manatsetsetra, mandria ny vady mandria ny zanaka ! Ary tsy ovako fenitra amin’izay nentin-drazana. Ary izao no lazaiko aminareo mivady kosa: aza malahelo fa manana ahy fa izaho no ray izaho no reny, fa tsy hovako fenitra amin’izao fanjakana nipetrahan-drainao sy nipetrahanao izao ianao ! »
Dia lasa Andrimpanarivofonamanjaka nankany Lohasa nampandry ny Bezanozano, nitondra ny tenin’Andriamasinavalona tamin’ny Ontaiva; rahefa nandre ny tenin’ny andriamanjaka ny olona dia faly, dia nanaiky. Avy any Lohasaha Andriampanarivo, dia niakatra an’Angavo, nahazo an’Ambohimasina, teo Ambohitrandriamanitra, teo Andranomalaza nankeo Sambaina dia niorina teo Ambatovory. Nanaiky Amoronkay sy Ivakiniadina. Niakatra taty Antananarivo indray izy, nandeha am-pilaminana tsy tahaka ny teo aloha intsony izay mandeha alina fa efa mandry ny tany, tonga nilaza fa vita i Bezanozano sy Ivakiniadiana ary Amoronkay izay efa azy rahateo.
« Izaho tsy naniraka olona, fa matahotra raha hitsanganan’ny basy aman-defona, fa ny vahoaka tsy mety hialan’ izany…! Tonga ianao Andriampanarivo fa nahatontosa ny tany sy ny fanjakana, ka faly aminao aho ! »
Andrianjakavololonandriana, izay napetrany teo Ambohitrarivo hitondra an’Avaradrano - Vakiniadina;
Izy roa lahy ireo sy ireo iray tampo aminy rehetra no nantsoina hoe « Ny zanak’anabavinan’Andriamasinavalona », isan’ny foko Andriamasinavalona.
Azo saintsainina fa nitovitovy tamin’izany fomba fifanekena nataon’Andriamasinavalona sy Andriampanarivofonamanjaka izany avokoa ireo fifanarahana nataony mba hahazoana ireo fanjakana madinika rehetra teto Imerina:
Tsy ovana ny fenitra efa nisy fa mipetraka ho tompom-bodivona amin’ny menakeliny, ho lovain-taranaka;
Tany amin’iny farany atsimo amin’Imerina iny, dia Andriandanitramantany no mpanjaka tompomenakely tao Itsinjoarivo, amoron’Ionive; nalain’Andriamasinavalona ho vady Ralanimboahangy zanany vavy araka ny fomba fifanarahana fanaony. Nony maty rainy, dia napetrak’Andriamasinavalona hiandry fanjakana tao Ambohimanjaka - Andramasina Ralanimboahangy. Ny taranany no Andriamasinavalona tompomenakely tamin’iny faritra iny izay nanao an’Andramasina ho vodivona.
Tamin’iny ilany avaratra sy andrefana-avaratr'Imerina iny izay vakin’ny renirano atao hoe Sahasarotra mivarina any Betsiboka dia nisy andriana maromaro nanana fanjakana madinika, ka ny nalaza dia izany Andriamasinteny tompomenakely tao Imiakotso sy Manohilahy. Nalain’Andriamasinavalona ho vady ihany koa ny zanany vavy atao hoe Ramananandrianjaka, ka nifanarahana fa ny zanak’izy ireo dia handova fanjakana ary izy dia hanoa an’Andriamasinavalona. Ramananandrianjaka no reny niteraka an’Andriantomponimerina mianadahy avy, ilay mpanjaka voalohany tao Ambohidratrimo.
Toraka izany Ranavalontsitakatrimerina andriambavy avy amin’ny Zanadralambo nalainy ho vady ka ny zanany dia nomeny hanjaka tao Ambohitrabiby; ary Ramananimerina kosa, dia zanak’andriana avy ao Antananarivo ihany ka Andrianjakanavalomandimby zanany dia nampanjakaina tao Antananarivo ihany.
Ratompondraondriana, zanaky ny Andriateloray, nateraky ny Andriandranando ary taizan’ny Andriantompokoindrindra, nalain’Andriamasinavalona ho vady ho entina hanamafisam-pihavanana amin’ireo havan’andriana sy hampandry fanjakana amin’ny tapany avaratra atao hoe Avaradrano iny; ka ny zanak’izy ireo Andriantsimitoviaminandriandrazaka, dia nomena fanjakana tamin’ny Avaradrano . Toy izao no lazain’ny tantara tamin’ ny nampakaran’Andriamasinavalona ho vady an-dRatompondraondriana ka nilazany fa handova fanjakana ny zanany:
Hoy ny raibe sy ny ray aman-dreny ary ny havan-drazazavavy:
Ny fanomezana fara sy dimby dia manome malalaka izahay, nefa kosa zanaka sy tompo ampihantana Andriamasinavalona, ka mba hataka sy hanta ataonay aminy:
« Raha avy izay hisarahana, na hisara-maty na hisara-belona, aoka mba hahazo fahatelon-tànana araka ny fomban’ny ambanilanitra; raha miteraka, aoka mba hahazo mandova fanjakana !….»
Dia hoy ny valin-kafatra nataon’Andriamasinavalona namaly:
«…Lazao amin’izy ireo fa faly tokoa aho amin’ny fanomezany ny ho fara-mandimby; lazao azy ireo anefa fa ny fangatahany fanomezana ny faha-telon-tànana amiko amin’ny andro isarahana dia tsy azoko ekena, fa ny Andriamanjaka tsy fehezi-mandidy ary fanjakana tsy azo zaraina, ary efa nolaviko tamin’ireo vadiko maro izany, fa fanomezana no azoko atao ary izay vitany no azy raha avy izay andro isarahana !
– Fa raha miteraka amiko kosa Ratompondraondriana dia mahazo mandova fanjakana ny zaza satria teraky ny razana nihaviako avy amin’i Rangita sy Rafohy ary Andriamanelo !.. .»
Toy izany ny fomba nangalan’Andriamasinavalona ny fon’ny olona ka nahazoany vady maro mba hampandriana tany sy hanitarana fanjakana. Maro tamin’ireo mpanjaka madinika teto Imerina no nanaiky an’Andriamasinavalona sady lasa havany akaiky na zaodahiny, na rafozany, na vinantony; dia tonga mpihavana indray Imerina manontolo.
Fifanarahana tamin’ny mpanjakan’Imamo Andriamasinavalona, Andriamatahobelirano.
Tsy mivadika amin’ny fifanekena. Mba hahamarin-toerana ny sisin-tany ka tsy hisian’ny disadisa sy fifanafihana amin’ny ady, dia nifanaraka Andriamasinavalona sy Andriambahoaka, mpanjakan’Imamo, fa ho avahana Imamo sy Imerina satria fanjakana roa lehibe samy mahaleotena ireo. Andriambahoaka zanany natao koa hoe Andriambahoakampovoanitany no mpanjakan’Imamo nonina tao Amboniazy, Itasy. Nifankahalala sy nifanaja tsara izy sy Andriamasinavalona; nifanaraka ny roa tonta fa ho faritana ny sisin-tany mampisaraka an’ Imerina sy Imamo. Toy izao hono ny fomba namaritana azy :
Samy niala maraina, vao maneno akoho tokana, izy roalahy. Andriamasinavalona avy aty Antananarivo, Andriambahoaka avy ao Amboniazy; dia samy mandeha amin’ ny làlana mahazatra mampitohy ny vohitra roa, ka izay toerana ifanenana no atao faritra izarana ny fanjakana. Andriamasinavalona dia nitana marina ny fifanekena. Andriambahoaka kosa nambosin’ny olony ka nivadika, dia tsy niandry ny akoho maneno amin’ny maraina, fa vao tapi-mandry ny olona dia niainga tao Amboniazy, fa te-hahazo tany be. Raha vao nahatazana an’Andriamasinavalona Andriambahoaka teo akaikin'ny renirano nifanenana, dia nihoraka ny mpanaraka an’Andriambahoaka:
« Lasantsika ! Lasantsika ny fanjakana lehibe sady lava horiranana fa kely foana ny an’Imerina ! Mihobia ry Imamo ! »
« Samia mitoetra amin’izao zara-tany izao:ka izay mangala-tsidiny amin’izao elanelan-tany izao, miady an-tanety sahalà, manani-bohitra aza mahafaka ! Miakatra Imerina ianao tsy vahiny, midina Imamo ianao ohatra ny tompony ! »
Ary nony vita izany, dia hoy ny tantara mikasika ny nanjo an’Andriambahoaka. Noho ny haratsian’ ny làlana, ny hamaizin’ny alina, ny famelezan’ny hatsiaka sy ny fanala anefa, hono, dia reraka mafy Andriambahoaka sy ny mpanaraka azy ka be ny narary kibo, narary tongotra, nanavy,…ary nisy maty teny an-dàlana aza, hono, nony niverina nody. Ninoan’Andriambahoaka fa todin’ny fivadiham-pifanekena nataony izany ka namely azy mafy ny fieritreretana.
Nony taty aoriana, nitsidika an’Andriamasinavalona ny Antehiroka mpitsitsika azy:
« Akory, Ialahy Andriamasinavalona ! Resy andro nizarana fa ho tompon’izao tontolo izao ! Tsy ny masin’odi-tandroka no tompon’ny omby fa ny mamatotra ny zanany ! Ny mpisoritra mamadi-belirano, ho lavo mandrakizay, fa ialahy Andriamatahobelirano, ho tahiana mandrakizay ! »
Nenjehin’ny eritreriny hatrany Andriambahoka ka nandefa olona 40 izy hifona amin’Andriamasinavalona, nitondra ondrilahy be hofaka, omby be ronono, volafotsy hidivava: nangata-tsodrano sy fanatsoahana ny ozona nifanaovana fa nivadi-belirano. « Tsy mahay mitso-drano anao aho hoy Andriamasinavalona, fa Andriamanitra izay nanaovanao fianianana tsy notoavinao no mahalala izany ! »- Vao mainka nasian’ ny eritreriny Andriambahoaka ka izy tenany mihitsy no avy nifona tamin’Andriamasinavalona.
« Ny ranomason’Imerina, fony niantsinanana, ho tonga feom-basy, toa kotronkorana an-tany, hody volafotsy haingom-bahoaka, ho volamena fehitanan’Andriana, ho vatosoa satroboninahim-panjaka ! Mandehana, aza tratry ny andro maraina, ianareo mpanompo manome voho tompo, fandrao maty tsy hitan’Imamo, ka manome soketa an’Antananarivo ! Tamin’izay hono no nahatonga ny fitenenana hoe: Aleo homana ny amberivatrin’Imerina, toy izay hivoky ny tapian’Imamo ! »
Taty aoriana, nasain’Andriambahoaka nanao hady fizarana sy fahatsiarovana izany Andriampivovo zanany, teo Ambatondramijay izay natao hoe: « hadin’Andriampivovo »: ka manomboka eo, manaraka ny renirano Iombifotsy, ny miorika dia Imerina, ary ny mivalana dia Imamo.
Famintinana: teo amin’ny renirano Iombifotsy izy roalahy no nihaona ka io renirano io no namaritra ny fanjakana roa tonta, ary niara-nanamafy ny fihavanana izy roa lahy fa hoy mantsy izy ireo: « Miakatra Imerina ianao tsy vahiny,midina Imamo ianao toy ny tompony ! »
Ady amin'ny mosary sy ny asa fampandrosoana[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny andro nanjakan’Andriamasinavalona dia nisy mosary lehibe, natao hoe « Tsimiofy » saika nandripaka ny vahoaka merina. Nisy rivotra sy orana nikija nandritry ny iray volana izay niverimberina isan-taona, namely ka potika avokoa ny voly na an-tanety na an-tanimbary; tsy nanana hanin-kohanina intsony ny olona ka tratra hatramin’ ny fianakavian’ ny andriamanjaka. Naniraka olona nitady vary sy hanina na ho vidina aza Andriamasinavalona ka tsy nahita raha tsy tany amin’ Andriandrivotra, tao Andraisisa, izay nanome maimaim-poana sy nanolotra hanina fanampiny aza ka faly ny andriamanjaka. Ary izay no nahatonga ilay fitenenana hoe : « Hany vary Andraisisa ! ». Novaliana soa Andriandrivotra ka natao menabe Andraisisa fa tsy menakely intsony.
Nahatsapa loatra ny fahorian’ny vahoaka izy ka ny vaindohan-draharaha nimasoany dia ny handresena ny mosary mba ampiadana ny ambanilanitra; nohamafisiny sy nampitomboiny ny fefiloha nanomboka hatreo Ankadimbahoaka ka hatrany andrefan’Ilanivato, mba ho tonga tanimbary midadasika i Betsimitatatra hiveloman’ny olony, fa hoy izy :
« Izao, ray Merina Ambaniandro, tsy misy tsy ho ahy izao manodidina ity nosy ity, ka tsy mba manan-drafy aho, fa ny mosary no rafiko, ary tsy mba manam-bola milevina sy vakoka fa ny fefiloha no mandako, ka hanatevina sy hanampy iny aho, fa iny no Vahilava mora ladinina, tantara be tsy mba levona, fa felan-tànan’ny razako, navelan’ny raibeko sy ny raiko amiko ho adidinareo. »
Mba hanamafisana ny fiarovana ny olona amin’ny mosary sy hampiadana azy ireo dia nisy fepetra sasany nampiharina mikasika ny fiarahamonina sy fampandrosoana ny toekarena:
Nampitomboina ny raharam-barotra ka nametraka ny « tsena » izy toeram-pihaonana amin’ny fifanankalozana sy nampiasana ny vola (ariary avy amin'ny real espaniôla) sy ny vakivakim-bola. Koa efa nisy ny tsena isan-kerinandro sy isan-tokon’Imerina tamin’izany (fa tsy vao tamin’ny andron’Andrianampoinimerina akory vao nisy).
Nividy tafondro iray izy (tafondro voalohany teto Imerina), tsy entina hiady akory fa marika hampitandremana ny olona fa tokony hanjaka ny filaminana sy fandriampahalemana (fa raha manakorontana dia mipoaka io tafondro « Befeo » io, ka matiny).
Nametraka ilay fomba atao hoe « fanolorana ny Vodiondry » ho mariky ny fanamafisana ny fanambadiana; ka tsy ny hena vody ondry ara-bakiteny intsony no natao fa nosoloina zavatra hafa na vola izany, na tany, na firavaka ….
Ny fiandrianana sy ny hasin'ny andriamanjaka[hanova | hanova ny fango]
Mba hampitombo hasina sy voninahitra ny andriamanjaka dia nametraka lalàna momba ny fiandrianana izy: Nalamina ny fiambenana sy fiarovana ny mpanjaka ka nisy ireo karazan’olona efa voatokana hikarakara sy hitaiza azy, toy ny Tsiarondahy, ny Madiotanana, ka tsy afaka manatona azy raha tsy misy fangatahan-dalana.
Ny fiarahabana no fomba fanehoana ny fifanajana voalohany indrindra. Koa nanana fiarahabana mitokana ny andriana toy ny hoe: « Sarasara (tsy ambaka), Tompoko e ! » (fomba fiarahabana ataon’ny tsiarondahy na ny tandapa amin’ny andriamanjaka, na ny Ambaniandro no manao an’io amin’ny andriana indraindray). « Tsara và, Tompoko e ! , Aza marofy ! ... Mandrosoa fanjakana !, Mifanantera amin’ ny ambanilanitra ! Trarantitra re, Tompoko ! » Raha samy andriana dia ny fiarahabana « Tsara va tompoko ! » no fanao ka ny zandry olona sy ny vehivavy no miarahaba ny zoky na ny lehilahy.
Ny fanomezana toerana ny « Elo mena » ho mariky ny fahefana sy fiandrianan’ny andriamanjaka irery ihany: ka izy irery ihany no tokony azo ialofana elo miloko mena, indrindra raha mikabary na mandeha eny an-dàlana.
Nandamina ny momba ny kianja sy ny fananganana ny Vatomasina amin’ny voahangy mivady sy volatsivaky ary ràn’omby volavita; teo Andohalo no nanaovana izany voalohany ho toeram-pikabariana sy fanandratana mpanjaka. Ary ny vohitry ny andriamanjaka, sy ny andriamasinavalona, tompombodivona dia nisy kianja sy vatomasina, fanaovana sorona omby amin’ny andro Fandroana.
Nampitomboina lanja sy voninahitra ny andro Fandroana amin’ny tsinambolan’ny Alahamady, satria andro fahatsiarovana ny nahaterahan’ny andriamanjaka (Ralambo, Andriamasinavalona ary Andrianampoinimerina tato aoriana), andro fanamafisam-pihavanana isan-tokatrano, isam-batan’olona.
Nohavaozina indray ny Lapa Besakana, tao Anatirova, izay natao toerana hanamarihana ny fiorenam-panjakana teto Imerina. Tamin’izay fotoana izay no namaliana soa an’ i Trimofoloalina, nahafoy tena nety atao sorona velona ny tenany ho voninahitry ny mpanjaka; nefa tsy novonoina izy na nalatsa-drà kely akory, fa mody nodidiana ka nosoloina ràn’akoholahy mena izay natentina ny trano (natao Tsy maty manota i Trimofoloalina sy ny taranany). Tao Besakana no nisy ny « afo tsy maty » izay afo ambenana tsy ho faty na oviana na oviana ka nisy tandapa miambina izany andro aman’alina.
Ny Zanakandriana voatendry hanjaka dia entina ao Besakana aloha, mijoro anilan’ ny fatana afovoany, mangatam-pitahina ka izany no atao hoe « Halampatan’ ny Besakana » (fototra iorenana), izay mari-pahefana ambony indrindra, ary tsy atao hoe manjaka raha tsy efa nandalo sy nonina tao Besakana.
Ny ambaratongan'ny havan'andriamanjaka[hanova | hanova ny fango]
Efa betsaka ny isan’ny havanan’andriana tamin’ny andron’Andriamasinavalona ary mbola niampy ireo zanany sy havany akaiky; dia nanao fandaminana vaovao izy ka nalahany nataony alohan’ny Andrianteloray sy ny Zanadralambo izay efa nalahatry Ralambo fahiny ireo zanany sy ny havany dia ny Zazamarolahy sy ny Andriamasinavalona; koa nanjary 6 ny isan’ny fokon’andriana teto Imerina:
Ary ny andriana enin-toko dia natao hoe « havan’andriamanjaka » izay samy azo arahabaina hoe « Tsara và, tompoko ! ».
Ny Zazamarolahy dia ireo zafikely sy taranak’izy 4-dahy nanjaka. Novain’Andrianampoinimerina anefa izany tato aoriana ka nataony toy izao: Ny tera-dRasoherina renibeny ihany no angalana izay hanjaka ka ny tera-behivavy (ny zana-drahavavin-dreniny) dia natao Zanakandriana, ary ny tera-dehilahy sy ny tera-dRangorinimerina natao Zazamarolahy. Ny Zanakandriana dia tsy tafiditra ao amin’ny sokajin’ny havan’andriana satria andriana toy ny andriamanjaka handova fanjakana. Rehefa niova ny andriamanjaka niaviany dia miongana izy ireo ka tsy mitondra intsony ny anarana hoe Zanakandriana. Ny zanak’izy ireo na ny zafikeliny fahiny dia nantsoina hoe « izy mirahalahy avy » na « izy mianadahy avy ». Nanomboka tamin-dRadama I vao nisy nantsoina hoe Printsy nalaina tahaka tamin’ny vazaha. Tsy nolovaina ny anarana hoe Printsy;
Ny Andriamasinavalona, taranak’Andriamasinavalomanjaka sy ireo iray tampo aminy, zokin’olona mitana fanjakana, mitoetra am-bodivona manana tranomanara sy vahoaka menakely manompo azy;
Ny Andriantompokoindrindra, na Zanatompo avy ao Ambohimalaza dia natao zokin’olona mitana fanjakana, natao fakana zazavavy ho vadin’ny Andriamanjaka ary mpanantatra ny raharaha voalohany ho an’ny Andriamanjaka izy;
Ny Zanadralambo sy ny Zanadralambo amin'Andrianjaka.
Ireto telo farany ireto no atao hoe lahiaivo fangalana izay mahasoa ny fanjakana; tsy manao ny fanomponan’andriana sasany izy afa-tsy ny manao fefiloha, mandoa miaramila, mamoly landy sy mandoa ny angady mondro ,…ary manatrika ny raharaha ataon’ny ray aman-dreny (ny Hova sy ny Bemihisatra ), misaotra azy ary manome omby sy mangahazo.
Taty aoriana, nisokajy telo ny fiantsoana ireo andriana teto Imerina:
Ny Andrianteloray, dia ny andriantompokoindrindra, ny andrianamboninolona, ary ny andriandranando,
Ny havan’Andriana, dia ny Zanadralambo sy ny Zanadralambo amin‘Andrianjaka.
Ny fomba sy ny zon’ny andriana teto Imerina amin’ny ankapobeny[hanova | hanova ny fango]
Nanana zo sy sata iombonana ny andriana rehetra (ireo tarana-dRangita sy Rafohy), izay iavahany kely amin’ny sarambabem-bahoaka, indrindra amin’ny adidy atao amin’ny andriamanjaka:
tsy mitondra entan’andriana;
tsy manao hazo lava (maka hazo any an’ala hanaovana ny tranon’andriana);
tsy mihady na mitaona tany mena amin’ny fanaovana fasana na fandevenana andriana;
Tsahivina koa anefa fa misy amin’ireo foko hafa no nahazo zo manokana: ny Antehiroka, ny Zafimamy, ny Trimofoloalina, …. dia tsy hanim-bodihena , tsy manao hazo lava, tsy mitaona tany mena, tsy alatsa-drà….; na manana zo toy izany aza izy ireo dia tsy ao anatin’ny sokajy atao hoe « andriana », satria tsy tarana-dRangita sy Rafohy. Tsy ny zo manokana ihany noho izany no maha andriana merina fa ny rà sy ny firazanana niandohana.
Mafy ny lalàna amin’ny fanambadiana teo amin’ny sokajin’ny andriana noho ny fiarovana ny firazanana sy ny fiandrianana ary ilay fomba hoe « lova tsy mifindra ». Ny andriana samy andriana ihany ary isan-tsokajiny raha azo atao no mifanambady. Noho izany ny « tena andriana dia izay andrian-dray sy andrian-dreny niteraka ». Ny taranaka ivelan’izany fanambadiana izany dia tsy andriana intsony.
« …Izao no mahazo mivady: ny andriana dia ny andriana tahaka azy ihany no vadiny; ny hova dia ny hova tahaka azy ihany; ny mainty dia ny mainty tahaka azy ihany no vadiny; raha manohitra izao, mananika andri- malama; ka raha misy manao izany dia amidy ihany fa mbola manao manjaka hova … »
Ary hoy ny boky « Firaketana » manazava: « Amin’ny fampakaram-bady, ny andriandahy dia tsy mba mandeha maka an-dravehivavy fa solom-bady no alefany. Ny andriandahy ambony (andriamasinavalona no ho miakatra ) dia mahazo manambady hovavavy, nefa kosa ny zanany amin’ny hova dia tsy azo alevina amin’ny fasany misy tranomanara sady tsy mandova tanindrazana azy, tsy mandova anaran-dray, fa omena lova hafa atao hoe « tolo-bohitra ».
Ny andriambavy kosa raha manambady hovalahy dia « mandrorona »; amidin’ny fokonolona izy ary ny vidiny dia hividianana mangahazo masaka, hanin’izay rehetra eo; izany no fanariana razana azy sady fanalàm-baraka faran’izay mahamenatra … Raha andriambavy amin’ ny andrianteloray sy Zanadralambo no alain’ny Andriandahy amin’ny terak’Ifohiloha ho vady dia « misandratra » izy ka ny taranany dia mandova ny anaran-drainy.
Ary ireo karazam-poko hafa toy ny Antehiroka, ny Zafimamy, ny Talasora, ny Folovohitra (ny hova) ary ny « Voaramasika » fakana ny angaralahy, ny tandapa, ny mpanao raharaha an-tokan-tranon’ny mpanjaka sy ny andriana sasany; samy nomeny avy ny anjara fitondrana sy adidy amin’ny fanjakana. Ka hoy Andriamasinavalona momba azy ireo:
« Ianareo Talasora, ataoko zokim-pirenena ianareo satria tao Alasora no niavian’ny razan’andriana rehetra…, ka ataoko mpanao soron’andriana, mpandatsaka ny andriana miamboho (ny zanak’Andriamitondra ireo). »
« Ianareo Antehiroka, havako ianareo, zanadahy:…raha mitsitsika aho dia ianareo no mpitsitsika ahy, ary raha misy hasina ataoko dia ianareo no manao…»
« Ny Ambaniandro na ny Bemihisatra na ny Folovohitra na ny Hova amin’ny ankapobeny: izy ireo no vahoaka maro an’isa teo amin’ny fanjakana. Raha miantso an-kabary ny ambaniandro ny andriana dia manao azy hoe: « Ianareo Ray aman-dReny !... »; Ary raha ny ambaniandro kosa manonona an-kabary ny andriana dia miantso azy hoe :« Ianareo zanaka amam-para !... »
Ny nantsoina hoe « Voaramasiaka » dia ny Manisotra, ny Manendy, ny Mainty tompon-tany taloha isan-tokony ka fangalana ny atao hoe Angaralahy, na ny Tsiarondahy na ny tandapa isan-karazany natao hikarakara sy hitaiza andriana (Fakana miaramila matanjaka sy kinga izy tamin’ny andro nanjakan-dRadama I taty aoriana lavitra ka nisy betsaka no tonga Manamboninahitra ambony XVI voninahitra mihitsy toa an-dry Rainingory, Rainingitabe, Rainihanjanoro,….).
Ireo sokajim-bahoaka rehetra ireo dia nety samy nanana « andevo » na olona very zo noho ny trosa na noho ny sazy natao mpanompo izay noheverina ho fananana toy ny fitaovana rehetra, novidina teny an-tsena. Afaka miavo-tena anefa izy ireny na avotan’ny havany ka miverina amin’ny toerana sy ny sokajy nisy azy taloha, na mainty, na hova, na andriana.
« Izao no ambarako aminareo ry Merina, fa hahatokoko Merina nefa vodivona itoeran’ny zaza izany: zara taiza fa tsy andriana !… »
Efa nitombo velarana tokoa ny fanjakana ka nilana fanaraha-maso mba tsy hisian’ny fitenenana hoe « tany lavitra andriana ka anjakan’ny adala »; ary atao ahoana tokoa moa no hahafantarana ny toe-drarahara any an-tany lavitra nefa tokony hakana fepetra sy fanafody haingana raha tsy misy solon-tenan’ny Andriamanjaka mahefa any an-toerana miteny amin’ ny anarany. Ohatra fotsiny ny vodihena ho an’ny mpanjaka, raha mamono omby: raha any Ifanongoavana na any Manohilahy avaratra no mamono omby, 3 andro vao tonga aty Antananarivo ny hena, efa maimbo tsy azo hanina; tsy maintsy asiana olona manana fahefana handray izany any an-toerana na eny akaikiny.
Ka ny hevitra hitany sy marina dia ny zanany na ny zanaky ny iray tampo aminy ihany no azo antoka hisolo azy satria toy ny tenany ihany izany fa tsy ny olon-kafa. « Fitsinjaram-pahefana no nataony fa tsy fizarana fanjakana velively », araka ireo teniny voalaza ery ambony.
Sanatria tsy adala velively Andriamasinavalona na kentrina, araka ny hevitr’ireo mpanao tantara maro, ka handrava ny efa novoriany sy natsangany noho ny fihetseham-po diso toerana. Tsy diso velively izy ary hendry satria fampandrindrana ny fitondrana fanjakana no nokasainy mba hahazoany manakaiky kokoa ny vahoaka sy hitadiavany ny soa mahamety azy ireo tamin’ny alàlan’ireo taranany mivantana.
Izany no nahatonga ny fisian’ny hoe « Menabe sy Menakely » izay toa midika hoe « nomena tany betsaka sy nomena tany kely » na « Fitondrana eo ambanin’ny elo menabe sy fitondrana manana elo mena kely ….».
Ny « Menabe » dia ny faritra nisy ny vohitra rehetra sy ny vahoaka teo ambany fahefan’ny andriamanjaka mivantana izay ny foibeny dia Antananarivo ihany. Ny mponina tamin’izany faritra na fanjakana izany dia nantsoina koa hoe Menabe. Tato aoriana anefa, rehefa niamboho Andriamasinavalona, dia samy nanjaka tamin’ny vodivona nisy azy avy izy 4-dahy zanany, nihazakazaka samy nanao « Menabe » ny faritra natolotra hanjakan’ izy ireo tsirairay. Ka ny Menabe tamin’izany dia nisy 3 no isa farany dia Antananarivo, Ambohimanga, Ambohidratrimo, Alasora dia efa Menabe hatramin’ny ela fa nametrahana ny zanakandriana handimby fanjakana;
Ny « Menakely » indray dia faritra kely iray ao anatin’ny Menabe ihany (toy ny hoe kaominina ao anatin’ny Distrika, ankehitriny) nefa toerana hanjakana sy iveloman’ireo Tompombodivona na Tompomenakely sy ny fianakaviany izay mandrakariva avy amin’ny foko andriamasinavalona. Ka ny mponina ao anatin’izany faritra izany dia nantsoina koa hoe « Menakely ». Fa hoy mantsy Andriamasinavalona:
« Ireo zanako ireo, ianareo ry Merina no tanety ary izy ireo no tsimbotry (valala mbola tsy hary elatra); ka na ho aiza na ho aiza no alehany dia ao an-kibonareo; ianareo no ivelomany ka tandremonareo ireo zanako ireo ! »
Nisy 12 vavy ny vadin’Andriamasinavalona, vokatry ny famoriam-panjakana, ary nisy betsaka toy izany koa ireo zanany izay nisy 9 lahy sy vavy maromaro.
Na teo aza ny hevitra pôlitika fandrindrana ny fitondram-panjakana efa napetraka dia tsy nanakana azy velively izany ho tena tia dia tia ireo zanany; samy tiany hahazo anjara fitondrana kely tsirairay teo amin’ ny fanjakana na zanany naterany na ny zanaky ny iray tampo aminy ka nahatonga ny fanjakana « Menakely » ho marobe. Noho izany dia efa nitady izay tokony handova tokana ny fanjakany izy, ho andriamanjaka tokana eto Imerina.
Tsy nanao tahaka an’Andriamanelo izy izay nampamono ny rahalahiny mba hampanjaka ny zanany Ralambo, na toy ny nataon’Andrianampoinimerina taty aoriana ka sahy nampamono ny zanany roalahy hafa mba hampanjaka an’Ilaidama. Tsy sahy nandatsa-drà Andriamasinavalona, nefa tsy maintsy hisy ny iray handimby.
Iza amin’izy 9 lahy no handimby ? Natao ny fitsapan-toetra, toa mitovitovy.
Natao indray ny fitsapana amin’ilay fomba fanao hoe « misondro-mandry ». Dia niara-nampatoriana izy 9 lahy ka ny 4 nisondrotra ary 5 nitambotsitra. Iza amin’izy 4 dahy nisondro-mandry indray no hanjaka ?
« Andray leiretsy ! Izay bozaka aman’ahitra ka hahafidy andriana ? Fa izay didin’Andriamasinavalona no didy ! »
Ary nony nohatonina kosa Isoratra tetsy Ambohipo, natahotra izy ka nalevin’ny mpitana azy.
Dia nikabary Andriamasinavalona namory vahoaka:
« Izao no ambarako aminareo ry ambanilanitra: loaka ny akàny, fa firy ny atody ? »
- Ary hoy ny vahoaka:
« iray no anay ! »
- Dia hoy Andriamasinavalona:
« Didiko ny feko maharary, avelako ny zanako tsy foiko; fa mamindra fo–njanaka ianareo ry Merina, fa alao Andriamampandry fa izaho hilaza »
Dia nampanalaina Andriamapandry fa hoy rangahy:
« izaho tsy manan-damba ! »
Dia nampananterana lamba izy ka notriariny tamin’ny zorony efatra ary nahosiny tamin’ny fotaka, ka natahotra ny mpanati-damba:
« Ento any, fa inona no fantatr’ialahy ? »
Dia hoy Andriamasinavalona nahita ny lamba rovitra mihosim-potaka:
Dia tonga Andriamampandry ary nikabary Andriamasinavalona nanao hoe:
« Izao no ambarako aminareo ry Merina, fa hahatokoko Merina nefa vodivona itoeran’ny zaza izany: zara taiza fa tsy andriana
Indro Andriatsimitoviaminandriandrazaka, tera-dRatompondraondrina, omeko an’Ambohimanga, mitoetra amin’ny Tsimadiloavaradrano, sy Ilafy, Ambatomanoina Volaniray, Fandàna, Merinkasinina Ambohimanambola, Hiaramy, Ambohipeno, Ambohijoky, Ambohidanerana;
Indro Andrianjakanavalomandimby tera-dRamananimerina, omeko an’Ambohitraina, Ambohiborona, Vakinamboanana, Antanamalaza dia Imerinatsimo;
Indro Andriantomponimerina tera-dRamananandrianjaka, omeko an’Ambohidratrimo, Ambohimaha 3 vohitra, Ambohitrimanjaka, Ambohimanoa, Ampananina dia i Marovatana rehetra;
Ary izaho kosa, hoy Andriamasinavalona, mitoetra eto Antananarivo foiben’Imerina.
Ary indro Andrianambonimena, zanak’anabaviko eo Alasora, zanakareo efa-dahy io handimby anareo na hiady aza ianareo. Ny zazalahifotsy avy amin’ny alahamaditany, io no omeko any amparany, andrian-tokan’Imerina. »
Ary nony vita ny nandaharan’Andriamasinavalona ny Havan’Andriana 6 toko, dia namory vahoaka tao Ambatovory izy, ka hoy izy:
« Izao havako rehetra izao, andriana tokana aho, ka voriko ny tany sy ny fanjakana, ity tany ity tsy anarànana ny adala: samia mitandrina izay tany ipetrahanareo…Ataoko Ambatovory ny anaran’ity tany ity tsy iovanareo fenitra ka amboleko voantsianarànana (ampaly), tsy hanarànan’ny adala [fo]. Koa samia mitandrina izao teniko izao !…»
Toa samy hendry avokoa teo ambany fahefan-drainy saingy ilay tao Ambohidratrimo no efa nanondrana sahady ka nitana babo ny rainy fotoana maro hanereny azy hanome ny fanjakan’Imerina manontolo ho azy. Nozonin’Andriamasinavalona ilay io ka maty talohany ary nodimbiasan’ny zanany Andriantrimobemihisatra.
Indrisy fa vao nikipy ny mason’Andriamasinavalona dia nivadika tamin’ny hafatra nataony sy nanaraotra fahefana avokoa ireo zanany izay nahatonga ny fizarazarana sy ny ady an-trano fa tsy nahay nifanaraka.
Niseho avy hatrany ny toe-dratsin’izy 4-dahy; nodiana tsy fantatra ilay dina hoe « zara taiza » fa samy nanamafy ny fanjakany avy sy ny sisitaniny ary nifandrafy fa samy nilaza ny tenany ho andriamanjaka.
Andriatsimitoviaminandriandrazaka, ilay tao Ambohimanga, nahazo be indrindra tamin-drainy ary noheverina fa tena hendry dia nitetika sahady ny haka ny fanjakan’ny rahalahiny Andrianavalonimerina teo Ambohitrabiby, izay nanana anjara farany izay kely indrindra. Mody nasiana lalao adin’ombalahy avy ao Ambohimanga sy Ambohitrabiby, izay nifarana tamin’ny adin’ny tarika an-daniny sy an-kilany ka nararaotinan’Andriatsimitovy namakiana ady lehibe hanafihana an’Ambohitrabiby; resy Ambohitrabiby ka naongany sy noroahiny hiala teo Andrianavalonimerina rahalahiny, nahidina ho isan’ny foko andriamasinavalona tsotra ny taranany, ary ny fanjakan’Ambohitrabiby sy Mandiavato dia natambany niaraka tamin’Ambohimanga, ka lasa fanjakana lehibe tokoa izany, izay niavian’Andrianampoinimerina.
Andrianjakanavalomandimby tao Antananarivo izay nitondra an’Imerinatsimo dia tsy nitsahatra nampanaiky sy nampanoa an’Andriambonimena tao Alasora, efa voatendrin’Andriamasinavlona fa handova ny fanjakana; tsy nanaiky lembenana na oviana na oviana anefa ity farany fa nanohitra ka tsy nisy fiantoana mihitsy ny ady teo amin’Antananarivo sy Alasora; tato aoriana dia nizara roa mihitsy ny fanjakana: Imerinatsimo nisy an’Antananarivo - Voromahery, Antsahadinta, Fenoarivo, sy ny tapany andrefana atsimo izay nofehezin’ny taranak’Andianjakanavalomandimby; fa i Vakinisisaony sy ireo menakely iray fitondrana aminy dia teo ambany fahefan’ny taranak’Andrianambonimena tao Alasora.
Andriantrimobemihisatra kosa tao Ambohidratrimo sy Marovatana dia nanamafy ny sisitaniny ka ny Merina izay tsy manao sangakely dia nosamboriny atao andevo raha tafiditra amin’ny faritr' i Marovatana.
Izany toe-javatra izany no nampirongatra indray ny tsy fandriampahalemana sy ny ady an-trano nanjaka teto Imerina nandritry ny 80 taona, nampandroso ny varotra andevo aondrana mankany an-dafin’ny ranomasina sy nampitobaka ny fitaovam-piadiana toy ny basy mba hiarovan-tena na hanafihana. Tsy fahadisoan’Andriamasinavalona izany fa ditran’ny zanany.
Rehefa samy nipetraka amin’ny fanjakany avy izy efa--dahy sy ny zanany nanoa, dia fanaon’Andriamasinavalona ny mitsidika sy mamangy azy ireny any an-toerana.
Andriantomponimerina ilay napetrak’Andriamasinavalona tao Ambohidratrimo - Marovatana hitondra fanjakana dia efa nampiseho ditra hatramin’ny ela.
Fa inona no nataony ? Nampanaoviny sanga kely (na nitapa-bolo nihety ka misy sanga eo aloha) ny mponiny Marovatana ka izay tonga any ka tsy misanga na Merina na olon-kafa avy aty ivelany, dia nosamboriny amidy ho andevo. Tezitra ny vahoaka ka niteny tamin’Andriamasinavalona hoe:
« Ahoana ny zanakao no mamoan-tsampona amin’i Merina, mampanao sanga ! Manao ny tsy fanaon’ny olona ! »
Dia nihomehy Andriamasinavalona nandre izany ka hoy izy:
« Aharoy volo i Merina, ry ley Andriantomponimerina ! »
« Samy manana ny azy ! »
Efa saika raikitra ny ady fa mody nanao maty izy nampadefa teny hoe:
« Ambarao amin’Andriamasinavalona fa « latsaka an-tany » (maty) Andriantomponimerina. »
Nalahelo ny Andriamanjaka ka najanona indray ny fanafihana.
Nony tonga tao anaty Rova dia nohidiny ny vavahady 7 sosona, dia norobaina avy hatrany ny Merina tafiditra tao, ary Andriamasinavalona nobaboiny nahibony: notanan’Andriatomponimerina an-keriny nandritry ny fotoana maro (7 taona hoy sasany, 7 volana hoy ny hafa; ny marina dia fotoana ela loatra ka nahatezitra an’Imerina).
Tsiravina sy tezitra Imerina, saika hanafika an’Ambohidratrimo nefa natahotra indray sao vonoiny ao ny andriamanjaka, ka vao maika loza fa alao nitady hevitra hafa hanavotana azy.
Ary tany am-pibaboana rehefa mba mitsidika an-drainy Andriantomponimerina dia hoy ny resak’izy mianaka:
« Ny andriana ô ! »
« Ahoana ? »
« Malahelo an’Antananarivo moa ianao ? Malahelo an’i Masoandro sy Besakana ? »
« Eny. »
« Omeo ahy ary Imerina ! »
« Tsy omeko kosa. »
« Eny ary, raha tsy maty eto ianao, tsy avelako raha tsy omenao ahy Imerina ! »
« Tiany hono aho, ka tsy foiny hilaozana ! »
Naniraka an’Ilambokely Andriantomponimerina nanao hoe:
« Antsoy Imerina ka lazao hoe: avoty amin’ ny vola 7 000 ariary Andriamasinavalona, ry Merina ! »
Dia nandoa vola Imerina …Nafatra ny vola natao tamin’ny harom-bazaha miisa 7 teo Alatsinainy ary nampitana tamin’ny lakana nankeny Ambohidratrimo. Izay, hono no nahatonga ny anaran’ilay toerana hoe Alatsinain’Ambazaha. Tsy marina izany hoy ny hafa fa « tsy azo avotam-bola amin-karena Andriamasinavalona fa fanjakana lehibe ». Fa nalain’Imerina ny tantsaha (lehilahy matanjaka sy fetsy maromaro avy any amin’ny faritry Antsahadinta sy Fenoarivo (ankehitriny)) nasainy mody mamangy ny andriana, nitondra amalona sy orana ho azy eny Ambohidratrimo ary mba haka namana amin’ireo mpiambina sy nitsikilo ny toerana fiarovana rehetra. Nataon’izy ireo fanao matetika izany ka tsy nanana ahiahy intsony ny tao am-bohitra. Nony ela taty aoriana, novokisan’izy ireo hena matavy ny mpiambina ka nony alina resy tory, dia nohadin’ny tantsaha ny rova, nobataina Andriamasinavalona, natohitohiny ny salakan’izy ireo nandrotsahana ny andriana tamin’ilay tevana eo atsinanan-drova, dia afaka ka nobabena hatrany Andriantany, tonga aty Ilanivato vao taitra ny teny Ambohidratrimo fa lasa Andriamasinavalona.
Raombana kosa dia nitantara fa ilay zafikeliny Andriantrimobemihisatra, zaza 12 taona, zanak’Andriantomponimerina izay nasain-drainy niara-nipetraka tamin-draibeny sy mpizaha ny haony no nalahelo mafy ity raibeny:
« Fa maninona Dadabe no mitomany foana sy malahelo ? »
« Tazomin-drain’ialahy tsy hody any Antananarivo aho ka malahelo an’Imerina ! »
Naheno izany ilay zaza dia nalahelo koa sady tezitra tamin-drainy ka nitady hevitra ny hamoahana azy. Ka raha mbola sondriana nilalao sy nilalonana ireo tandapa sy mpiambina dia nentin’ ilay zafikeliny nivoaka ny vavahady tsy nisy mpiambina ity raibeny dia navoakany moramora ka afaka ary efa nisy mpandray ka nitondra azy haingana ka efa aty Andohatapenaka vao fantatr’Andriantomponimerina. Nisafoaka izy ka saika nolefoniny novonoina ho faty ity zanany fa narovan’ny tandapa.
Faly kosa Imerina nandray an’Andriamasinavalona izay nisaotra sy nitso-drano ilay zafikeliny nanafaka azy ary nanozona an’Andriantomponimerina:
« Raha zanako nasiako soa koa, ka namatotra ahy sy namitaka ahy, tohàra izay hahakenda an’ialahy ! Faingàna izany ho an’ialahy ! »
Tsy ela tokoa taty aoriana dia maty kendan’ny taolana Andriantomponimerina, ary notsofin’Andriamasinavalona handimby azy hanjaka tao Ambohidratrimo ilay zafikely ka nomena anarana hoe Andriantrimobemihisatra. Izany, hono, no niavian’ny anarana hoe Ambohidratrimo (vohitr' i Ratrimo) fa ny tena anarany taloha dia Imananety.
Mbola maro ny zava-niseho nandritry ny fanjakan’Andriamasinavalona izay itarafana ny fahendreny, ny hatsaram-pony, ny fiahiany ny vahoaka ka ilazana fa olona nanam-panahy sy fahendrena lehibe izy:
tsy mba nampan-datsa-dra izy araka ilay tantaran’ i Trimofoloalina, ilay lehilahy nanolo-tena atao sorona mba hanomezana voninahitra ny mpanjaka, nefa tsy novonoina fa nosoloina ran’akoholahy ny rany na ranon-kodinato;
nampanjaka ny safidin’ny olona tsirairay araka ny tantaran-dRatsisaramba vehivavy izay nomeny alàlana hifidy izay lehilahy tiany ho vady: I Doàka, lehilahy lehibe manankarena nidehadehaka avy any Imerinatsimo sa Imalo, tovolahy tsara tarehy nalemy fanahy sy nimpirimpirina avy any Avaradrano ? Imalo no nofidin-dravehivavy ka nahatonga ny fitenenana manao hoe: « Ny harena tsy mahaleo ny tarehy sy ny fanahy ! »
Nanjaka tokana teto Imerina Andriamasinavalona, 300 taona lasa izay. Noho ny voninahitra sy ny hasina nananan’Andriamasinavalona dia nitombo laza tokoa ny vahoaka merina tamin’izany andro izany, tsy mena-mitahy tamin’ireo fanjakana sy firenena nanodidina azy, Andriandahifosy tany Antsakalava (1610-1680) na Andriantsirotso (1690-1720) tany Antankarana.
Tany ampitan-dranomasina, tany amin’ny manodidina ny taona 1700 tany ho any na taloha keliny, betsaka ny firenena efa natanjaka sy nidadasika ka samy nanana ny Andriamanjakany nanan-daza.
La Frantsa anie ka nanana an’i Louis XIV, mpanjakany be voninahitra e !;
i Rosia nanana an’ i Piera Lehibe « tsar » nanandaza sy nahery an’ady;
Frédéric I de Brandebourg tonga mpanjakan’ i « Prusse » tany Alemaina (jermania);
Aurangzeb, amperora « Mogol » nanitatra ny fanjakany tany « India »;
Natao fitaratra fakana tahaka Andriamasinavalona teo amin’ny fiaraha-monina satria nanome lanja ny fanajana ny maha-olona.
Ela velona tokoa Andriamasinavalona fa nahita ny zafikeliny, ny zafiafiny, ary angamba koa ny zafindohalika, fa nety nahatratra 100 taona, hono, na mihoatra aza ka nahatonga ny fiteny firarian-tsoa sy tso-drano manao hoe: « Veloma aina ho tratra antitra toa an’Andriamasinavalona anie, hifanantitra amin-janaka aman-jafy ! ».
Famantarana ny fikambanan'ny « Taranak' Andriamasinavalona »
Misy ny manontany manao hoe: « Iza moa no Andriamasinavalona ary mbola misy ve izany ankehitriny ? ».
Betsaka koa ny lahatsoratra sy ny dinidinika amam-panehoan-kevitra samihafa mikasika io fanontaniana io satria ankehitriny misy ny antokon’olona milaza fa tsy nisy izany taranak’Andriamasinavalona izany ary koa ao ny te ho « Andriamasinavalona » na tsy izy aza.
Ka ho valin’izany fanontaniana izany sy ialana amin’ny ahiahy, dia indro atolotra manaraka etoana ny fanazavana azo omena araka ny tetiarana voaray sy ny tantaran’ny vohitra fiaviana sy ny fizarana isam-poko sy isam-pianakaviana.
Ampahatsiahivina fa ny vohitra fiavian’ny Zanak’Andriamasinavalona eto Imerina dia fantatra mandrakariva fa, ankoatry ny hadivory izay iraisan’ny vohitra tranainy rehetra, dia misy fasana mitomandavana (toy ny fitomiandalana) eo am-povoan-tanàna izay an’ny terak’Andriamasinavalona manokana, misy tranomanara sy kianja miaraka amin’ny vatomasina, misy amontana sy aviavy maniry; milaza izany rehetra izany fa nisy andriamasinavalona tompomenakely nonina teo tany am-boalohany.
Indrisy fa rava na lasa haolo ny ankamaroan’izany vohitra izany ankehitriny, indrindra nanomboka tamin’ny fanjanahan-tany: voaroba ny fasana angalarana ny harenan’ny maty, potika sy voazera ny vatomasina akana ny vato atao làlana sy fasana, notapahina ny amontana sy ny aviavy atao kitay, tsy voatsangana intsony ny tranomanara fa efa voaota fady fa nampidirana olona hafa razana.
Ny atao hoe « Andriamasinavalona » tany am-piandohany dia ireo taranaka rehetra avy amin’ny zanak’Andriamasinavalona, mpanjaka, izay nanoa sy ny zanak’anabaviny sy ny zana-drahalahiny nahazo menakely, nipetraka am-bodivona teto Imerina. Nantsoina koa hoe ny Zanak’Andriamasinavalona izy ireo.
Taty aoriana anefa Andrianampoinimerina sy ireo mpanjaka nandimby azy dia nametraka ho sokajin’ny « Andriamasinavalona », ireo taranaky ny mpanjaka rehetra izay nanoa azy sy ireo olona nahavita be tamin’ny fanjakana, na dia tsy avy eto Imerina aza mba ho mariky ny valisoa fara-tampony mendrika azy ireo.
Koa nanomboka tamin’ny taon-jato faha -19 noho izany dia nisokajy telo lehibe ny foko atao hoe « Andriamasinavalona »:
Ireto avy ireo sokajin'olona anisan'ny Andriamasinavalona:
ny Zanak’Andriamasinavalona, dia ireo taranany mivantana;
ny taranaky ny mpanjaka sy andriana ambony izay tsy avy eto Ankibonimerina, nefa nanoa sy nanaiky ny Andriamanjaka teto Antananarivo ka natao isan’ny « Andriamasinavalona »;
ny olon-tsotra na olona avy amin’ny foko hafa ivelan’Imerina, na vahiny, nomem-pankasitrahana ka natao laharan’ny « Andriamasinavalona ».
Ny ankamaroan’ny mpanoratra na mpikaroka tantara, na teratany na vahiny dia nampifangaro ireo fizaràna ireo. Tsy nisahirana izy ireo na tsy te halala izany fihavahan’ izany fizarazaràna, fa nitetika nampitovy izany kanefa na teo amin’ny fomban-drazana na teo amin’ny fiaraha-monina dia samy nanana ny azy izy ireo tsirairay avy. Ohatra: ny Zanak’Andriamasinavalona dia tsy mihinan-kena ratsy; ny sokajy faharoa indray anefa satria avy ivelan’Imerina izy ireo dia mety tsy mifady izany fa nanaraka ny fomba fanaony teo an-toerana ihany; ny sokajy fahatelo, satria olon-kafa, vazaha, na silamo, dia tsy mahalala ny fisian’izany fomba izany akory.
Toy izao manaraka izao ny antsipiriany amin’izany fitsinjarana izany:
Ary Imerina na kely sy bitika aza, tsy mbola nisy mpahalala akory tany ivelany, efa mba nanana an’Andriamasinavalona ho kiady sy voninahiny ..
Izy ireto dia niavaka tokoa satria nanana zo sy sata manokana nihoatra ny an’ireo andriana hafa satria saika nahazo vodivona sy menakely izy ireo ary nahatandrina ny fomba amam-panao nentin-drazana nampiavaka azy, araka ny ho lazaina aoriana kely momba ny zo sy satan’izy ireo.
Ny taranak’Andriamasinavalona[hanova | hanova ny fango]
Avy amin’ireo zanany dimy lahy tsy nanjaka sy ireo zanany vavy nomena vodivona:
Rasohanamanjaka na Rasohanana, zana-dRasolomananambonintany, tao Ambohimahamanina;
a) Ny terak' i Renilambo, Ambohidrapeto no vohitra nomen’Andriamasinavalona ho vodivona ipetrahan’ireo zanany tsy nanjaka, dia Andriamborosy sy Rafaralahimanjaka, terak’ i Renilambo vadiny. Izy ireo sy ny taranany no andriamasinavalona tompomenakely teo voalohany;
Tany amin’ny taona 1808 tany ho any dia napetrak’Andrianampoinimerina teo Ambohidrapeto koa Ratavy zanany tamin-dRamanantenasoa; nonina tao amin’ny lapa « Imarivolanitra » izy sy ny zanany Ramiza, nisaotra omby tamin’ny andro fandroana. Ary nozarain’Andrianampoinimerina Ambohidrapeto ka ny 1/3 ho an’ny zanakandriana sy zazamarolahy tarana-dRatavy (Merimandroso, Vonelina, Marobiby, Ambohijafy). Ny andriamasinavalona terak’ i Renilambo kosa nanana ny 2/3 dia Ambohimidasy, Andohalafy, Andramahavola. I Renilambo sy ny zanany Ratavy sy Ramiza dia samy milevina ao Ambohidrapeto. Misy lafin-kavan-dRanavalona III koa ao ka izany no nandevenana ny printsy Ratsimamanga anadahin-dreniny eny;
b) Andriankotofananina dia nomen-drainy an’Anosipatrana. Ireo zanak’Andriankotofananina no andriamasinavalona voalohany tompomenakely tao Anosipatrana sy Ilanivato dia: Andriantsikoto, rain’Andriandambotsimanahy sy Andriamambafotsy ary Ratsirangaina. Taty aoriana dia napetrak’Andrianampoinimerina teo koa Rasendrasoa vadiny sy ireo iray tampo aminy ka nozaraina indray Anosipatrana: ny zanakandriana sy ny zazamarolahy nanana ny 1/3 ary ny andriamasinavalona ny 2/3. Ireo andriamasinavalona zanak’Andriakotofananina no milevina eo an-tampon’Anosipatrana sy Ilanivato. Rabobalahy zana-dRasalimo koa dia nanana fonenana teo Anosipatrana.
Nanitatra ny menakeliny tany Anosibe - Amoronkay koa Andriankotofananina tamin’ny alàlan’ny fanambadiana, ka ny zanany nandova azy tany dia ry Andriatsimanazy, Andriantomponiloharano, Andriantsiherifahasina, Andriamanohatany mirahalahy avy, izay niavian’ny andriamasinavalona avy ao Anosibe – Amoronkay, Soamonina, Ambatomanjaka, Ambohitraina, Fihasinana. Ny taranany dia nifandray sy nifanerasera tamin’ireo Andriamasinavalona avy ao Ambohitrandriamanitra sy Imerinarivo. Rabodonandrasana, zafiafin’Andriakotofananina, vadin’Andrianatody tao Imerinarivo, no reny niteraka an’Andriatsimianatra, rain-dRazafindrahety na Ranavalona III mirahavavy;
d) Ramatoanimerina na Rafotsiramifidilahy no vavimatoan’Andriamasinavalona sy Ramananandrianjaka vadiny, ary iray tampo amin’Andriantomponimerina, ilay mpanjaka voalohany tao Ambohidratrimo sy rahavavin-dRanavalontsimitoviaminandriana tao Anosimanjaka. Nonina tao Ambohijanakandriana - Mamiomby (atsinanan’Andringitra) izy ary niteraka an’Andrianavalonandrianjaka sy Rakaloy ary Ravololona;
Naka menakely tao Imahatsinjo (andrefan’Ambatofisaorana) Andrianavalonandrianjaka ary nanorina vohitra vaovao nataony hoe Imiantsoarivo, izay novain’Andrianampoinimerina anarana hoe Ambatofisaorana taty aoriana. Nanambady tamin’ny taranak’Andrianavalonimerina ilay noroahina hiala an’Ambohitrabiby izy ka niteraka telo mianadahy dia Andriamiaramanjaka, Razakatsivolanina ary Renibodonimerina;
Andriamiaramanjaka nanjaka tao Ikaloy, nandova ny anabavin-drainy Rakaloy, dia nanambady an-dRanavalonandriambelomasina zanaka vavimatoan'Andriambelomasina, mpanjaka tao Ambohimanga, ary niteraka an-dRamboasalama (Andrianampoinimerina) sy Ralesoka. Rahefa maty izy dia nalevina ao Ambohijanakandriana - Mamiomby fiaviany.
e) Razakatsivolanina indray dia nipetraka sy nanjaka tao Imiantsoarivo na Ambatofisaorana ary milevina ao ihany; nifangaro tamin’ny zanak’Andrianavalonimerina ilay naongana avy ao Ambohitrabiby ny taranany ka izy no isan’ny niavian’ireo andriamasinavalona marobe amin’iny faritr' i Mandiavato iny;
f) I Renibodonimerina kosa dia efa niteraka an’Andriamaheritsialaintany (tao Amboatany) sy Andrianamboamanjaka (tao Imerimandroso) ary Rabodonimerina, vadiben’ Andrianampoinimerina, izay izy vao nanambady an’Andriambelomasina ka niteraka farany an-dRafaravavinandriambelomasina;
g) Andriamaheritsialaintany moa dia olon-kendry sy mpitari-tafika mahay ka nomenan’Andrianampoina zaodahiny menakely maro be ho valisoa izay nozarainy tamin’ireo zanany: Rambolamanana nahazo an’Antanamalaza, Rakaloanosy tao Ambalanirana ary Ramanitrahasina tao Fiakarana-Ivato;
h) Ravololona zanaka faravavin-dRamatoanimerina dia nijanona tao Ambohijanakandriana ihany: izy no niavin’Andriampinoana, Andriamonja, sy ireo andriamasinavalona avy ao Ambohijanakandriana – Mamiomby;
i) Rasohanana dia Zanakavavin'Andriamasinavalona tamin-dRasolomanambonintany, ary anabavin'Andrianavalonimerina tao Ambohidrabiby. Napetrak'Andriamasinavalona ho andriantompomenakely sy tompombodivona tao Ambohimahamanina izy, izay mbola nitondra ny anarana hoe Ambohidahy tamin'izany fotoana izany. Notsatohina vatolahy teo Ambohidahy ho fahatsiarovana ny nahazoan-dRasohanana io tanàna io. Nanambady an'Andriandambozozoro tao Malaza izy ary niteraka an-dRabiby (Antalaho / Antanetibe), Andriamalama (Isoanangano), Ranosy (Androhibe) ary i Andriamangarira (Antsahadinta);
j) Ranavalontsimitoviaminandriana, zanak’Andriamasinavalona faravavy (Jereo ny tantarany amin’ ny Vohitra Anosimanjaka - Marovatana) Izy no fiavian’ireo andriamasinavalona « Zanadranavalona »;
k) Ny Zana-dRalanimboahangy, vadin’Andriamasinavalona. Ny taranany dia ireo Andriamasinavalona avy ao Andramasina, terak’Andriantsolo mianadahy.
Ny taranaka sy ny zanak’anabavy ary ny zana-drahalahin’Andriamasinavalona[hanova | hanova ny fango]
Ravololonandriana, anabaviny, niteraka an'Andriambetandra, tao Anosikely - Fenoarivo;
Ravololontsimitoviaminandriana, anabaviny, niteraka an-dRavololondralambo, tao Ilafy sy an'Andriambolanambo tao Namehana;
Ranavalomananambonintany, anabaviny, niteraka an’Andrianambonimena, tao Alasora, sy an-dRangorinimerina, (renin’Andriambelomasina, mpanjakan'Ambohimanga) tao Androhibe - Ambodirano;
Ravololondrenitrimo tao Ambohimiakoja, niteraka an'Andrianjakatrimo tao Ivatobe atsimo sy Andriandambozozoro tao Ivatobe avaratra sy Malaza;
Ranavalontsimitoviaminandriana, ilay anabavin’Andriamasinavalona, dia nanambady an’Andriampanarivofonamanjaka, mpanjaka tao Ifanongoavana (Amoronkay sy Vakiniadiana). Ny tantaran’izy roa dia efa voalaza tamin’ny famoriam-panjakana voalohany nataon’Andriamasinavalona. Niteraka marobe izy roa ka ny zanany roalahy izay voatanan’ny tantara ny anarany dia Andrianjakavololonandriana tompomenakely tao Ambohitrarivo sy Andriantsimitovifonamanjaka, tompomenakely tao Ambohitrandriamanitra. Ireo no zanak’anabavin’Andriamasinavalona, niavian’ireo andriamasinavalona ao Ambatovory, Andranomalaza, Sambaina amin’ny Vakiniadiana sy Ambohitrandriamanitra, Imerinarivo, Miadamanjaka sns …amin’ i Vakinisisaony.
Toy izao ny tetiarana azo mikasika ny taranak’izy roalahy:
1) Andrianjakavololonandriana tao Ambohitrarivo, nampitondraina ny nentin’Avaradrano (Ivakiniadiana) niteraka an’ i:
Andrianifoinamanjaka (tao Ambatovory, Sambaina, Lohavohitra) vadin-dRafotsiraivoramavo (anabavin-drain’Andriamary, mpanjakan’Imamo andrefana) izay niteraka roalahy dia:
Andriandambonavalona niteraka an-dRazakatsihono, tao Sambaina (vavy natao lahy, nitondra fanjakana ary nahazo tantara tamin’Andrianampoinimerina) sy Rasavolahy zokiny sy Rasavolahy zandriny.
Andriamiarinarivofonamanjaka, izay niteraka an’ i
212) Andriantsaratandra (Imerinarivo) niteraka an’:
Andrianatody (vadin-dRabodonandrasana, zafiafin’Andriakotofananina tao Anosibe) niteraka an’ i Andriatsimianatra, vadin-dRaketaka avy any Angivy-Ambohipiara, ray niteraka an-dRasendranoro sy Razafindrahety - Ranavalona III, mpanjakan’ i Madagasikara farany;
Andriamanitrinitany (Ambohipoloalina). Izy dia rahalahin’Andriamasinavalona mpanjaka, faralahy nahazo menakely tao Ambohipoloalina ary niteraka an-dRatrimomiambonilahy izay rain’Andriamborosinandriana dimy mirahalahy.
Andriamborosinandriana dia nanambady an’Andrianjaza, anabavin'Andriambelomasina, ka niteraka an’Andrianarabo, Andriantsoanandriana, sy Andriankotonavalona, izay samy lehilahy malaza tamin’ny andron’Andrianampoinimerina, nony naka an’Ivakinankaratra izy.
Izy ireo dia natao zazamarolahy satria zanak’anabavin’Andriambelomasina, tera-dRangorinimerina.
Ny taranak'ireo rahalahin’Andriamborosinandriana kosa nijanona ho andriamasinavalona dia ny taranak’Andriandambozafinandriana, Andriamitohinarivo, Andriamparamasina sy Andriamaria.
Izy ireo dia ny teraky:
Andrianavalonimerina, dia ilay zanak’Andriamasinvalona notendrena hanjaka tao Ambohirabiby, ka nilan’Andriatsimitoviaminandriana - Ambohimanga ady, resy dia noroahiny hiala ny fanjakany sy ny vohitra nisy azy;
Ny taranak’Andrianavalonimerina dia nataony andriamasinavalona avokoa; ireo no niavian’ny ankamaroan’ ny andriamasinavalona amin’Ambohimandrosohasina, Ambatofisaorana, Kaloy sy Mandiavato;
Rafondrazaka, dia zanaka naterak’Andriatsimitoviaminandriandrazaka, mpanjaka tao Ambohimanga. Nampanoaviana anefa izy ka Andriambelomasina, zana-dRangorinimerina anabavin’ny mpanjaka no nandimby fanjakana. Ny Zana-dRafondrazaka kosa dia ireo andriamasinavalona ao Anosy avaratra,, niavian-dry Raombana sy Rahaniraka sy ny mpiray tampo aminy;
Ny taranak’Andrianavalonjafy mpanjaka, zafikelin’Andrianambonimena tao Alasora rahefa tsy lasa vadin’Andrianampoinimerina, dia nijanona ho zazamarolahy na andriamasinavalona avokoa;
Ny taran-dRamananandrianjaka (Ravorombato), mpanjaka tao Ambohidratrimo ka ny zanany Rabehety dia noresen’Andrianampoinimerina;
Ireo taranakin’ny mpanjaka tao Ambohidratrimo, rahefa resy Rabehety, dia niely patrana eran' i Marovatana, toy ny any Mamiomby:
Nisy zafikelin’Andriambelomasina mpanjakan’Ambohimanga (Razafinandriamanitra sy Rafaralahiranginga) tonga nanambady tao Ambohipiara ka izay no antony nisian’ny Zanakandriana sy ny zazamarolahy avy ao, niavain-dRanavalona III; fa ny sisa kosa dia andriamasinavalona ihany.
Ireo taranaky ny mpanjaka rehetra resy sy nanoa an’Andrianampoinimerina avy ao Ambohitrabiby, Ambohidratrimo, Antananarivo, Alasora dia natao « andriamasinavalona » avokoa, rehefa tsy lasa zazamarolahy noh ony fanambadiana na noho ny toerana notanany.
Ireo mpanjaka sy ny taranany, tsy avy eto Ankibonimerina nefa nanaiky mora foana ny fahefan’Andrianampoinimerina na nanampy azy koa tamin’ny famoriana fanjakana dia nomeny tombontsoa hipetraka amin’ny fanjakany taloha ihany fa toy ny Tompomenakely, ka izao ny didy napetrany: « …ary ireo andriana zanak’andriamanjaka nanaiky tany Imamo, tao Vonizongo, dia tsy azo atao Marolahy ireo, fa tsy tenan’Andriamanjaka aty Imerina ), ka mitondra Menakely, ary naman’ny andriamasinavalona ». Torak’izany koa no nataony tamin’ireo andriana amin’ny Vakinankaratra. Ireto ireo Andriana nanjaka tsy avy eto Ankibonimerina nanaiky mora foana:
Andriamarimampihovohovo, tao Ambohitrondrana, Imamo andrefana: izy sy ny taranany dia natao zazamarolahy, nefa marolahy tsy tenan’ny andriana avy ety Imerina ka natao hoe: « Marolahin'Andriamary »;
Zanak’Andrianentoarivo 10 toko, avy any Vonizongo;
Andrianamboarinandriamanitra mirahalahy, Ambohibeloma, Imamo Atsinanana;
Andrianjomoina, avy any amin’ny ala atsinanana Bezanozano);
Andriamaroanaka, Ambohitrandraina - Vakinankaratra, Andriamasindraibe, Antsirabe, Vakinakaratra;
Andriamanalina, Manandona, Vakinakaratra;
Andrianonitomponitany, Betafo, Vakinankaratra;
Andriambongo sy Andriamanalimbehiantana, Menabeiarivo,Vakinankaratra;
Rajoakarivony zanak'Andriamanalina IIII, tao Fanjakana,Isandra; (tantaran’ilay antsikely hoe « Mitambolanela »);
Andriambavizanaka, Alananindro,Ilalangina; nahazo tantara tamin ’izy niakatra naaieky an’Andrianampoinimerina, ka nanaovany orimbato - hady atao hoe Ankadilalangina ao Ambohimanga);
Noho izy ireo tsy avy eto Ankibonimerina ary ny sasany aza dia tsy taranaka avy amin-Rangitaa syRafohy akory, dia maro tamin’izy ireo no tsy nanaraka na nanaja intsony ireo fomban-drazana nentin’ny zanak’Andriamasinavalona, fa nanaraka sy nanohy hatrany ny fomban-drazana fanaony teo an-toerana na teo amin’ny fanjakany.
Andrianampoinimerina, Radama II, Ranavalona I sy ireo mpanjaka nadimby azy ireo dia nanondrotra ho isan’ny Andriamasinavalona, ireo sokajin’olona sasany nahavita be tamin’ny fanjakana, mba ho valim-pankasitrahana fara-tampony na dia tsy andriana avy eto Imerina aza, toy an-dry:
Ratsilikaina sy Andriamahazonoro, Anakara-Anteimoro avy any Ivatomasina – Vohipeno;
Andriantsitaitra, andriana sakalava nonina tao Tangaina;
ny kiriolona (créoles), ny silamo-arabo, mpivarotra na mpandraharaha ho an’ ny fanjakana ka ny notendrena ho andriambaventy tany anindrana dia natao isan’ny Andriamasinavalona.
Noho izany, ity sokajy faha-3 ity dia tsy sokajy ara-pirazanana, fa azo heverina toy ny antoko fanomezana voninahitra ihany, laharana mitovy amin’ny « Andriamasinavalona ».
Ny zo sy satan'ny Andriamasinavalona[hanova | hanova ny fango]
tsy milanja andriana.
Izay fahefana nananany izay no nilazana azy hoe « Ketsa mahafehy tena » ka nomarihina tamin’ireto zo ireto;
Manao ny « saotra omby » (sorona) amin’ny andro fandroana;
Tsy avadika ny « Andriamasinavalona » (famadihan-drazana), satria efa fomba nolovaina tamin’ireo andriamanjaka razambeny; ny hafa sy ny bemihisatra no manao izany raha tiany;
Tamin’ny andron’Andriamasinavalona mpanjaka, dia mbola vitsy ihany ireo taranany no nipetraka am-bodivona. Nitombo isa anefa ireo « Andriamasinavalona » teto Imerina, 100 taona taty aoriana fony Andrianampoinimerina nanjaka satria ireo tompomenakely rehetra, mpanjaka madinika, nanaiky sy nanoa azy dia nataony avokoa ao amin’ny sokajin’ny « Andriamasinavalona » nanerana an’Imerina 6-toko, araka ny efa votantara etsy aloha.
Nizarazara isam-pianakaviana sy fonenana na vodivona araka ny fiaviany avy izy ireo, ary ny ankapobeny dia naka ny anaran’ny razambe loharano niaviany mba iavahany amin’ny havany hafa: efa nisy hatrany amin’ny 50 tany ho any ny isam-pianakaviana sy isan-toko nitondra ny anarana hoe « ny zanak’Andriamasinavalona » tamin’io taona io. Nisy ny naharitra ela hatramin’izao fotoana izao ireny fikambanam-pianakaviana ireny, toy ny « Zanadranavalona ao Anosimanjaka » izay nahay nitandro ny firaisan-kina niaro ny fomban-drazana, nanana foto-kevitra ijoroana, toy izany koa ny « Fikambanan’ny tera-dRalanimboahangy - Andriantsolo ao Andramasina », ny « Fikambanana Andriana ao Antsahadinta », sns…; ny ankamaroany kosa dia toa efa lasa tantara ihany sisa izay iezahan’ny fikambanana « ny Taranak’Andriamasinavalona » arenina ankehitriny.
Marihina ihany koa fa nifangaro be ihany ny « Zazamarolahy » sy ny « Andriamasinavalona » tamin’ny fanambadiana ka tsy voavaka tsara intsony indraindray na ny fonenany na ny razambe fiaviany.
Tamin’ny taona 1840 izany hoe 30 taona taorian’ny niambohon’Andrianampoinimerina, dia nanao fiantsoana ho miaramila nanerana an’Imerina 6-toko i Ranavalona I ka anisan’ny voaantso tamin’izany ireo « zanak’Andriamasinavalona », ny « zazamarolahy » ary izy mirahalahy avy « zanakandriana ». Nitarika ny fanisana tamin’izany Rahaniraka 10 Voninahitra, Officier de Palais.
« izy mirahalahy avy »: 6 lahy (avaradrano: 2; Marovatana: 2; Sisaony: 1; Ambodirano: 1);
tamin’ny « zazamarolahy »: 72 lahy (avaradrano: 36; Marovatana: 9; Sisaony: 4; Ambodirano: 23);
tamin’ny « Andriamasinavalona »: 1816 lahy amin’ny Imerina 6-toko.
Ny antsasany tamin’ireo ihany anefa no natao miaramila dia ireo salama tsara, manan-karena: manana andevo, omby vary; ny sisa tsy lany miaramila kosa dia ireo tsy salama na ireo tsy manana harena firy na andevo na omby ka natao « borizano », miandry tanàna.
Dia toy izao, araka io fanisana io, ny isan’ny vatan-dehilahy « Andriamasinavalona » voaantso hanao miaramila isam-poko, isam-bohitra ary isan-toko.
Teo amin’ny Voromahery ambonivohitra 89 lahy (Antananarivo sy ny manodididna, Ambohidrapeto-Itaosy, Ambatondratrimo, Tangaina, Anosipatrana-Ilanivato, Ankadimbahoaka).
Zanak’Andrianizina (Analaroa, Ambohimangakely);
Tambato (Andreba, Soavinarivo, Ankazobe);
Mamolakazo, Imamo (Andranomasina, Vasiana, Tapiavola, Amboniazy, Antanetimboahangy).
Zanak’Andrianonihafa (Ambohinaorina, Ambohidrano);
Zafin’Andriampoanandriamanitra, Ambohitrambo, Imamo (Ambohitrantenaina, Andranovalona);
Zana-dRarontany, Valalafotsy Imamo (Hiasy, Ambohitromby, Mandrosoa, Miadamanjaka, Belanitra).
Zanadratompondraondriana sy ny Zanadravololona (Ambatomalaza, Ambohipananina, Kianjamalaza);
Zanak’Andrianavalonimerina (Ambatofisaorana, Ambohimandrosohasina, Andranovelona);
Zanak’Andriandahimbolamena, sy Ratomponivololona, Andriamiaramanjaka (Soavina, Ambalanirana, Ambohijanaka, Ambohitrandriananahary, Anosindrapanana, Ankady,..).
Zanak’Andriantsitakatrandriana sy Andriandambozafinimerina (Soavina, Beravina, Anosinandriana, Tanjombato,Ampanga…).
Zanak’Andriakotofananina (Ambohitraina, Soamonina, Anosibe, Fihasinana, Ambatomanjaka..);
Zanak’Andrianifonamanjaka (Ambohitrandriamanitra, Andranomalaza,);
Zanak’Andrianatsantsa (Merinarivo, Ambohidrano, Mangarano, Mahatsara);
Terak’Andriamanitrandriana (Miadamanjaka, Lazaina, Ankadivory, Ambohitrinifolo…) Ampahadimy: 86 lahy;
Zana-dRalanimboahangy, Zanak’Andrianonive sy Rafanompoanandriana sy Andriampanazava-nimerina, sy Rafanomponjozoro (Antsobolo, Andramasina, Soavinarivo, Manjaka, Iharanandriana, Rakalavao, Ambohibemanjaka, Ambohitromby, Ambohitraina,…).
Zana-dRanavalona (Anosimanjaka, Fiakarana, Tsarazaza);
Zanak’Andriatomponibemihisatra (Miandrarivo, Beravina);
Zanak’Andriatsieranolona (Masinandriana, Andranomanjaka);
Zanak’Andriandambozozoro (Andambozozoro, Mieridaza, Besaiky..);
Zanak’Andriamanitra Ampanjakana (Ambohidrano, Maridaza, Ambohitraina,Tsarahasina);
Zanak’Andriampanarivo (Ambohitrinilahy, Ambohitsimihafa);
Zana-dRamatoa (Mamiomby, Androvakely, Sambaina, Ambohitsoa, Maroharona..).
Zana-dRangorinimerina (Ankeribe, Ambohidrazana, Tsirangaina, Ionive, Masinandriana, Soavina, Ambohidava, Vinany, Merinarivo);
Zanak’Andriamanjakatokana (Tsarazaza, Ambohinaorina, Marianina, Tsimatahodaza, Ambohitrinilahy, Manankasina, Anosivato, Meritsiafindra, Manjaka,..);
Zanak’Andrianamboarinandriamanitra (Mangasoavina, Merikanjaka, Antsahadinta, Ambatomalaza, Merikanjaka, Soavinandriana);
Zanak’Andriambahoaka (Amoronikitsamby, Faravohitra, Ambohidrainandriana, Soalazaina, Poliny, ..);
Zanak’Andriandambozozoro (Malaza, Vatobe, Ambodiafontsy, Androhibe, Ambatomanoto, Ambatomanody, Ambohimahamanina, Antanetibe, Ambatobe);
Zanak’Andrianjakatrimo (Vatobe, Ambohimahitsy, Androhibe, Ambohitrivoimanga).
Ny Andriamasinavalona, zanak’Andrianentoarivo[hanova | hanova ny fango]
Zanak’Andriantomponiandriana (52) (Tsilanimboninahitra);
Zanak’Andriamitananiteny (33) (Volaniray);
Zanak’Andrianamelanandriana: 52 (Mangany);
Zanak’Andrianampitahotra: 64 (Famailahy);
Zanak’Andriatsimaitoarivo: 67 (Varamaina);
Zanahariantany: 70 (Vonitsiazonafo);
Zanak’Andriampomanjaka: 27 (Madiokororoka);
Zanak’Andriamahamaninarivo: 23 (Sakafolahy);
Zanak’Andriampanomponolona 19 (Voninahitrinitany).
Ny Andriamasinavalona amin’ny Vakinankaratra[hanova | hanova ny fango]
Ny amin’ny Menabe: 45 (Ambohimasina, Ambohipolo, Soavina, Ambohitsimanova, ...);
Ny amin’ny Loharano: 25 (Ambohiponana, Ivohimalaza, Inano, Ambohimitsinjo, ...);
Ny amin’ny Manandriana: 74 (Ambohimahazo, Manandriana, Ambohinamboarina, Tsarafidy, ...);
Ny amin’ny Fisakana: 21 (Ambohimanarivo, Mady ...);
Ny Iarivo: 44 (Betafo, Masinandraina, Soavina,…).
Natao io fanisana io tamin’ny taona 1840, noraiketina an-tsoratra ka voatahiry ao amin’ny arsivam-pirenenan’ i Madagasikara. Io fanisana io no nanome ny isan’ny vatan-dehilahy Andriamasinavalona, tokony handeha hanao miaramila, izany hoe iray na roa isam-pianakaviana; maro be koa angamba no nandositra sy niafina ka tsy fantatra. Raha atao ara-keviny, ny isan’ny Andriamasinavalona rehetra (antitra, tanora, vehivavy, ankizy) dia tokony ho 4 na 5 heny mihoatra noho io isa io, izany hoe 8 000 olona any ho any, tamin’izany fotoana izany. Voalaza an-tsipirihiny ny anaran’izay nantsoina ka tonga, ny anaran’ny rainy, ny fonenany, ny fananany.
Ny sasany tamin’izy ireo dia nanana menakely; ny ankamaroany kosa efa nanomboka sahirana aram-pivelomana; fantatra izany tamin’ny filazam-pananana nataon’ny tsirairay: ny isan’ny andevo, ny omby, ny vary. Nisy tena mpanefoefo satria nanana andevo am-polony maro, omby aman-jatony, vary am-bata famarana maro. Nisy koa anefa no nilaza fa tsy nanana na inona na inona,dia nolazaina fa « mpirenireny », tsy lany miaramila.
Ho an’ny fanjakana anefa dia natao kitro ifaharan’ny fahefan’ny andriamanjaka izy ireo, satria afaka nifehy ny vahoaka menakely teo aminy, ary raha nitambatra dia lasa hery lehibe tsy hay tohaina.
Rehefa resy ny fanjakana merina taty aoriana ka lasa zanatany frantsay Madagasikara, dia hitan’ i Gallieni, governora jeneraly, fa ireto foko Andriamasinavalona ireto izay miparitaka eran’ny tany sady nanana zo betsaka teo am-pelatanany ary fahefana amin’ny vahoaka, dia mety hanelingelina azy amin’ny tetika fanjanahana tiany ampiarina; ka nataony fahavalo tsy maintsy resena noho izany ny Andriamasinavalona rehetra.
Koa taorian’ny nandefasana an-tsesitany an-dRanavalona III (27 Febroary 1897), ny isan’ny didy noraisin’ i Gallieni voalohany dia ny nanafoanana ny rafitra « vodivona sy menakely ary tompomenakely » araka ny didy arrêté laharana faha-605 tamin’ ny 7 Avrily 1897. Foana hatreo ireo zo maro nananan’ny Andriamasinavalona ka ny fitenenana fotsiny ho Andriamasinavalona aza dia toy ny fandikan-dalàna mihitsy.
Maro tamin’ireo mpiray tanindrazana, tsy Andriamasinavalona no faly sy nandihy helika amin’izao fahavoazany izao. Hatramin’izao dia mbola tsy nahitana firy mpanoratra vahiny ka mba nilaza zavatra tsara momba ny « Andriamasinavalona » ary nisy aza sahy nanome anarana azy ireo hoe « les barons brigands »; fa dia ho izany daholo ve ny Andriamasinavalona ?
Ny mpanoratra teratany sasany indray, nentim-pialonana angamba noho ireo zo nihoa-pampana nananan’ny Andriamasinavalona, na noho ny fieboebona nasehon’ izy ireto indraindray, satria betsaka no nanao izany, dia tsy mba nilaza zavatra tsara loatra momba azy ireo.
Noho io lalana navoakan’ i Galliéni io dia maro be ireo Andriamasinavalona no very harena tampoka, satria nogiazan’ny fanjakana mpanjanatany ny ankamaroan’ ny fananany ka nozaraina na namidy mora tamin’ ireo vazaha na malagasy mpanampy na naman’izy ireo; nirotsaka rahateo koa etsy andaniny ny lalàna mandrara ny fanandevozana.
Vokatr’izany dia betsaka tamin’izy ireo no nandeha nitady fivelomana ivelan’ny faritra nisy azy toy ny vahoaka rehetra, nikarama tamin’ny toeram-piharin’ny Vazaha sasany, nitady ravinahitra hatrany anindratany. Nisy tamin’izy ireny no very fananana tanteraka sy very anaran-dray teo amin’ny tany niaviany, satria nony mba niverina an-tanindrazana taty aoriana dia namantana fananana efa lasan’olon-kafa, ny fasana sisa no iraisana amin’ny havana. Ny ankamaroany kosa anefa dia nijanona teo amin’ny vohitra niaviany ihany, niara-nihafy sy nifampizara izay kely sisa tsy voaroba tamin’ireo vahoaka menakelin-drazana fahiny.
Tsy nionona tamin’izany toerana nametrahan’ny mpanjanatany azy izany anefa ny sasany tamin’ireo Andriamasinavalona fa niezaka tsy ho resy teo amin’ny fiainana ka nitondra avo hatrany ny hasin’ny firazanany sy ny toe-tsaina maha-andriana azy ireo ka nanampy araka izay azony natao ireo mpiara-belona manodidina azy. Betsaka ireo Andriamasinavalona no nandranto fianarana sy fahalalana na teto an-toerana na tany am-pitan-dranomasina ka tonga olomangam-pirenena tsy manam-paharoa; teo ireo nitarika ny tolon’ny fahafahana handravana ny fanjanahantany hatrany am-boalohany ka hatramin’ny farany; teo ireo sangan’ny firenena tamin’ny lafin’ny fahaizana sy fahalalana ka nanan-daza naneran-tany; betsaka no nitana andraikitra lehibe teo amin’ny fitondram-panjakana nandritra ny fanjanahantany sy ny fanjakana malagasy nahaleotena indray; tsy tambo isaina ireo nitari-draharaha na teo amin’ny lafiny ara-piarahamonina, na teo amin’ny lafiny ara-pivavahana sy fanabeazana, indrindra teo amin’ny faritra sy vohitra nisy azy. Tsy vita ny hitanisa ny anaran’izy ireo eto satria marobe ary sao misy hadino ka ahazoan-tsiny, fa ao ny tantaran’ny firenena efa mitahiry izany ary ao koa ireo havany sy taranany hitantara ny asa vitany araka ny fahitany azy.
Ny faniriana dia ny mba hananan’ireo taranaka ankehitriny sy ho avy, zanaka amam-para, ny toe-tsaina avo sy mendrika nasehon’ireo zoky ray aman-dreny ireo, hijoro hatrany mba hanana ny toem-panahy sy saina, sy ny fahasahiana hiaro ny fomba amam-panao amin’ny maha-Andriamasinavalona.
Teo amin’ny tantara dia maro be tokoa ireo vohitra nalaza nonenan’ny foko Andriamasinavalona, isan-tokon’Imerina. Toa very tadidy ny sasany amin’izy ireo ankehitriny, satria maro no efa nilaozan’ny mponina sy ny taranaka satria tsy nifanaraka intsony amin’ny fomba fiainana ankehitriny (an-tendrombohitra avo sarotra hidirana, saro-drano, feno fasana, …), toeram-pitsangatsanganana sisa no azo atao aminy. Betsaka koa nefa no mbola honenana ary very ao anatin’ny vahoaka, simba na very aza ny vakoka tranainy maha-vohitr’andriamasinavalona azy, ka tantara manjavozavo sisa fantatra momba azy.
Koa mba ho fampahafantarana ny mpamaky sy ny taranaka dia noezahana ny amoahana etoana ny tantaran’ny vohitra sasany nonenan’ny Andriamasinavalona, araka ny lovan-tsofina nomen’ny taranaka, ny tantara fonosiny ka voasoratra, ny mbola mampiavaka azy hatramin’ny ankehitriny. Tsy feno, tsy lavorary angamba ny fitantarana, na misy fahabangana izay mampiavaka tsy voalaza, koa ianareo ihany dia afaka manitsy izany: « ataovy toy ny tonom-bomangan’ilay Mora, ka any an-tenda manitsy ny bingo ».
Marobe ny vohitra tokony hotantaraina ao amin’ny faritry « Voromahery » izany hoe ireo vohitra manodidina mivantana amin’Antananarivo sy ny ao Antananarivo fa iray ihany aloha no horesahina dia Anosipatran-Ilanivato. Isan’ny vohitra nalaza Anosipatrana hatramin’ny andron’Andriamasinavalona satria napetrany hanana vodivona sy menakely teo ilay zanany lahy atao hoe Andriankotofananina, izay razana niavin’ireo andriamasinavalona ao Anosipatrana sy Ilanivato ary Anosibe - Amoronkay. Tsy hitantara firy intsony ny momba azy eto satria efa voalaza ery aloha izany. Ny tiana homarihina dia ny taty aoriana: nametrahan’Andrianampoinimerina honenan-dRasendrasoa vadiny sy ireo iray tampo aminy koa teo Anosipatrana ka nifampitazana sy nifampizara fananana teo ny andriamasinavalona sy ny zanakandriana. Matetika moa ny fizarana dia mitelo: 1/3 an’ny zanakandriana sy zazamarolahy ary ny 2/3 dia an’ny Andriamasinavalona. Tato aoriana indray dia nahazo toerana honenana teo koa Rabobalahy, zana-dRasalimo vadin-dRadama I, ka mbola eo ireo taranany sasany.
Ny tiana asiana resaka dia Ilanivato. Andriandambotsimanahy, zanak’Andriankotofananina no naka vodivona voalohany teo Ilanivato, loharano niavian’ny Andriamasinavalona teo, toa an’Andriambola, zanany, Andrianabo, Ranaivo – Rahanetra, ry Rahasivola sy Ratarivola (nanambady an-dRazafianaka, anadahin-dRanavalona I) sns, ary ny nalaza taty aoriana ela dia izany mpitandrina atao hoe Rambelo.
Amin’ ny hevitra vitsivitsy ambaran’ny tantara ho niavin’ny anarana hoe Ilanivato dia ireto roa ireto no azo heverina ho marina:
1) Ny tendron’ny nosy lavalava iorenan’ny tanàna dia misy vatolampy izay mbola hita tsara eo an-dohany avaratra amin’Ilanivato; kanefa ny ilany atsimo-andrefana misy ny famonoambiby, dia tsy mba misy vatolampy be loatra tahaka ny ilany avaratra; koa araka izany ny ilany dia misy vato, ny ilany tsy misy;
2) Nisy koa nilaza fa ny mponina teo taloha (andriana na hova) dia nisaraka roa nony efa kelikely; ny sasany nijanona teo ihany,fa nisy kosa lasa lavitra nonina ao amin’ilay vohitra kely atao hoe Ivato, any atsimon’Ambositra.
« Ny ilan’ny foko dia eo ary ny ilany kosa any Ivato. »
Vohitry ny Andriamasinavalona efa hatramin’ny ela Ambatofisaorana, mbola honenan’ny taranaka, anefa vitsy mpahalala ivelan’izy ireo. Vohitra miorina ao avaratr’Isadabe, amin’iny làlana miala avy eo Talata-Volonondry, mianavaratra mahazo an’Ambatomanoina mandalo an’Ambohitrolomahitsy.
Imiantsoarivo no anaran’Ambatofisaorana taloha.Toy izao no ambaran’ny lovantsofina ka mbola tadidy tsara.
Izany andrian-dehibe atao hoe Andrianavalonandrianjaka izany no voalaza fa nanorina azy. Izy io dia zafikelin’Andriamasinavalona mpanjaka, fa zanaka lahin-dRamatoanimerina (vavimatoan’ny mpanjaka) nonina tao Mamiomby, atsinanan’Andringitra; nanana anabavy izy natao hoe Rakaloy; samy naka vohitra natao vodivona izy mianadahy ka Rakaloy dia teo Ikaloy, nitondra ny anarany ary izy kosa teo Imahatsinjo.
Nivavaka, hono, aloha Andrianavalonandrianjaka nitady famantarana nanao hoe:
« E! Andriamanitra Andriananahary, hipetraka amin’ity tanàna ity aho, ka omeo fambara fa ho maro dia maro ny vahoaka honina eto ! »
- Razakatsivolanina, tompom-bodivona tao Imiantsoarivo (Ambatofisaorana), ary milevina ao am-bohitra ao ihany, ao amin’ilay fasana atao hoe « Andranolava ». Izy no loharano niavian’ireo Andriamasinavalona avy ao satria niteraka dimy lahy izy dia: Andrianavalona, Andriandio, Rainandriamanitrahasina, Rainandriankotovao ary Ingezalahy.
Tamin’Andrianampoinimerina nampandry tany amin’iny Mandiavato no miantsinana-avaratra iny, dia niakatra nitaingina ilay vatolampy avobe eo ambony atsinanan’ny tanàna izy. Be dia be ny fahana sy ny hasina naterin’ny olona ho azy teo. Faly izy noho ny fitiavan’ny olona azy. Dia nitsangana izy, niedinedina, nivandravandra amin’ny maso mihiratra sy mibaliaka be mijery ny vahoaka, moa va tsy ombilahy hiantoraka hiady ? Izany, hono, nanaovan’ny olona azy voalohany indrindra hoe « Ombalahibemaso ». Dia tamin’izay izy nisaotra ny vahoakan’Imiantsoarivo ka no nanovany ny anaran’ny tanàna natao hoe « Ambatofisaorana ».
Sambaina izay hotantaraina eto dia ilay vohitra kely eo andrefan’i Manjakandriana, izay an-dalovan’ny lalam-pirenena faha-2, atsinanan’ i Nandihizana (Carion) sy ny lalàm-by Antananarivo-Toamasina.
Fony Andriamasinavalona nanjaka dia Andriampanarivofonamanjaka, zaodahiny, vadin-dRanavalontsimitoviaminandriana no tompomenakely lehibe tamin’iny faritra atsinanana manamorina ny ala iny hatrany avaratr’Ambatovory (toko Avaradrano) ka hatrany atsimon’Ambohitrandriamanitra (Vakinisisaony). Maro anaka izy ka ny roa lahy nandova fanjakana dia Andrianjakavololonandriana (tao Avaradrano) sy Andriatsimitovifonamanjaka (tao amin’ny Vakinisisaony).
Andrianjakavololonandriana dia nonina tao Ambohitrarivo, nanjaka tamin’ny ilany atsimo amin’ny toko Avaradrano (Ivakiniadiana ankehitriny) ary niteraka an’Andrianifonamanjaka; ity indray nanambady an-dRafotsiraivoramavo, zanak’anabavin-drain’Andriamarimapivovo, mpanjaka tany Imamo andrefana. Niteraka roa lahy izy roa dia: Andriandambozozoro sy Andrianjakafonamanjaka.
Andrianjakafonamanjaka dia napetran-drainy tao Ambatovory; nanambady an-dRanavalokoandriamanitra izy, izay zanaka vavin’Andriambelomasina, mpanjakan’Ambohimanga. Lasa vinanton’ny Andriamanjaka noho izany Andrianjakafonamanjaka ary ny zanany sy ny taranany dia natao isan’ny « zazamarolahy »: Andrianamboatsimaharivo sy Andriantsiresy izay nanambady an-dRabodosambaina, zanak’Andriandambozozoro, avy ao Sambaina.
Andriandambozozoro indray dia nanjaka tao Sambaina; niteraka maromaro izy fa ny voatanan’ny tantara dia izy mianadahy: Andriandambonavalona sy Rabodosambaina vadin’Andritsiresy voalaza eo ambony. Tsy nipetraka teo Sambainaloatra Andriandambozozoro fa lasa nifindra indray nankany Marovatana, tao Andambozozoro, andrefana-avaratr’Ambohipiara, ka niteraka an-dRalambozozoro sy ny taranany izay manana lafin-kavana aty Lohavohitra - Sambaina.
Andriandambonavalona, ilay zanak’Andriandambozozoro tao Sambaina dia maro anaka ka ny zanany vavimatoa dia Razakatsihono, nitondra fanjakana, ary ny zanany lahy dia Rasavolahy zokiny (milevina ao Ambatovinaky Antananarivo) sy Rasavolahy zandriny (milevina any Ambohidrano andrefana).
Ranavalonjafy, zanakavavin-dRasavolahy zandriny dia nanangana ho zanaka ny Dr Andrianangaly, 12 Voninahitra, isan’ny nianatra ho Dokotera mpitsabo voalohany tamin’ny Dr Davidson sy niara-niasa taminy; izy no ray niteraka ny Dr Andrianaly. Any Sambaina izy no milevina. Andrianaly (1840-1886) dokotera voalohany nahavita fianarana tany Edimburg, Ekaosy (avaratr'Angletera); rehefa tafaverina dia noraisin’ny fanjakana ho dokotera mpitsabo. Tamin ny 14 Aprily 1881 no nampakatra ho vady an-dRasendranoro, rahavavin-dRanavalona III izy. Nisy fiampangana azy ho nandronjin-doha an-dRasendranoro, izay heloka mahafaty; tsy novonoina anefa izy fa nalefa sesitany tany Ambohimandroso-Tsienimparihy-Betsileo. Tamin’ny 1885 dia nakarina taty Antananarivo izy natao mpitsabo miaramila tany Manjakandrianombana, izay indray vao nitsabo marary tao an-tranony tao Ambatovinaky - Antananarivo. Maro ny olona nanatona azy fa tsara fanahy izy sady mahay. Maty tampoka tamin’ny 23 jolay 1886, ary nalevina ao amin’ny fasany ao Ambatovinaky ihany.
Tsy mba voasoratra ao amin’ny tantaram-pianakaviana ity lahatsoratra ity, fa voalaza ao amin’ny Bokin’ i P.Callet:
Razakatsihono tao Sambaina dia nahazo tantara tamin’Andrianampoinimerina. Andriandambonavalona dia maro anaka ka Razakatsihono, vavimatoa, no nataony vavy lahy, hitondra fanjakana tao Sambaina. Nividy vanja sy basy ho an’Andrianampoinimerina izy: vanja 3 barika, basy fangolodoha 10, angalisa 3, bevarahina 1, tsifidianana 1, marovy 2; izao no nateriny tany amin’Andrianampoinimerina:
« Toky no omeko anao na dia vehivavy aza aho, hoy izy; dia hoy ny Andriana: Ento miverina ihany ireo fiadiana ireo fa vavatany iny atsinanana iny !... »
« Na dia vehivavy aza aho, mahasoava anao, hahavorianao fanjakana, fa mba manana sakaiza mahatoky hahazoako ireo fiadiana ireo aho, fa ianao lehilahy be sitra-po hamorianao fanjakana ! »
« Reko ny teninao, hitako ny soa aterinao ho ahy ; ka izao no ataoko aminao: omeko anao ny ampaha-dimin’ny tany ao Sambaina ao, ary ny efa-toko an’Andriamifonamanjaka rehetra; ka raha mbola taranako koa no andriana dia tsy ovako mandrakizay; fa vehivavy nahavory tany sy fanjakana ianao. »
Andriambolanambo, zanak’anabavin’Andriamasinavalona, mpanjaka, no andriana tompom-bodivona tao Namehana, nanambady an-dRamanitrandriatsimitovy na Rasoherinareniny (vavimatoan-dRanavalontsimitoviaminandriana) ka niteraka an-dRasoherimanantany, izay lasa vadin’ny mpanjaka Andriambelomasina tao Ambohimanga. Efa nanambady an’Andrianonihafa i Rasoherina vao nalain’Andriambelomasina ho vady, ka hoy Andrianonihafa nionona : « …Raha alainao, mahatrarantitra anao ! ».
Ary Andrianonihafa tsy tamana intsony tao Namehana, fa be voalavo sy bibilava tompon-drano tao ka nifindra nankeny Ambohidrano, alatsinanan’Ambatofotsy - Zanadralambo izy ka tany izy no niteraka ny zanany atao hoe Andriantokanamantany, andriana fiavian’ny Andriamasinavalona sasany ao Ambohidrano. Misy lovantsofina milaza fa tao Mahatsinjo, avaratr’Ambatofotsy izy no nitoetra ary ny menakeliny no tao Ambohidrano; nefa hoy Andriambelomasina:
« Aiza no ianareo andriamasinavalona indray no hibaby ny menakely fa aoka ianareo hiantsinana eo Ambohidrano ary izy hiakandrefana eo Mahatsinjo ! »
Izany hono no nahatonga ny fasan’Andriantokanamantany ho ao Mahatsinjo. Antanantsara, avaratr’Ambohimanga nomena ho menakelin’Ambohidrano koa ho fanampin’ i Mahatsinjo.
Ny loharano ao Ambohidrano no fisotron’ny Andriamanjaka aty Antananarivo, nohon’ny hatsarany fa madio, mamy, mangatsiatsiaka. Misy zohy eo ambany atsimon’ny vohitra, fieren’ny kristianina tamin’ny « Tany maizina ».
Maro be ny vohitra malaza nonenan’ny zanak’Andriamasinavalona tao Vakinisisaony satria ankoatra ireo vodivona nisy ny taranaky Ranavalontsimitoviaminandriana anabaviny, vadin’Andriampanarivofonamanjaka (amin’ny Vakinampasina: Ambohitrandriamantra, Merinarivo, Miadamanjaka, Lazaina, Mantasoa …), dia tao koa:
ny Taranak’Andriankotofananina (Vakinampasina: Anosibe, Soamonina, Ambohi-traina, Fihasinana …);
ny zanak’Andrianavalonarivo sy Andriandahimbolamena (amin’ i Alasora: Ambohijanaka, Ambalanirana, Ambohitrandriananahary …);
ny Tera-dRalanimboahangy, vadiny (amin’ Ampahadimy: Andramasina, Ambohitromby, Ambohitraina).
Ambohimahatakatra, vohitra tranainy, eo atsimon’ny tanànan’ i Mantasoa, fa ny renirano Varahina no mampisaraka azy. Vohitra mbola rakotra ala tranainy sy anirian’ny ahitra sy zava-maniry maintso lava milenodenoka, toerana tokony atao fitsangatsanganana sy fakan-drivotra.
Vohitra nanana ny lazany hatry ny ela, fony Andriamasinavalona nanjaka, saingy saika haolo fa nosongonan’ i Tsimanampiovana – Mantasoa eo akaikiny; ny fasana tranainy sy ny trano vitsivitsin’ny taranaka sendra mandalo sisa mijoro. Ao no misy ny fasan-dRasoherina reniny, na Ramanitrandriatsimitovy renin-dRasoherimanantany, vadin’ny Andriambelomasina, mpanjakan’Ambohimanga, loharano niavian’ireo andriamanjaka rehetra nanjaka taorian-dRadama I, fa hoy mantsy Andrianampoinimerina nampihatra ny didy nataon-draibeny:
« …Fa avy amin’ny tera-dRasoherina ihany no hangalana izay hanjaka amin’ity tany ity … »
Fa ahoana moa ny tantaran’ity vohitra ity sy ny taranaka nipoitra avy eo ? Ny anarany dia mampatsiahy ilay vohitra voalohany any avaratra atao hoe Ambohitsitakatra izay naorin’ny foko merina vao tonga teto ampovoantany notarihin’Andriatsitakatra sy ny namany, raha lazaina fa avy any ampitan-dranomasina any atsinanana, avy any amin’ny tany hoe « Nusantaria » (Nosy maron’ i Indônezia) no fiaviny. Taona maro taty aoriana dia nanorina indray an’Ifanongoavana ny taranak’ izy ireo izay nanjakan’Andrianamponga.
Tany amin’ny taona 1500 tany ho any, nanorina ny fanjakana entin’ny andriana ramatoa Rangita, zanakavavin-dRafandramanenitra, taranak’Andrianamponga I, ka nataony hoe Imerimanjaka ny renivohiny ary izy nantsoina hoe Andriamanjaka (andriana manjaka). Rangitamanjakatrimovavy no niavian’ny andriana merina rehetra.
Niteraka maro Rangita ka Rafohy zanany vavy no nandimby azy ary ny zanany lahy atao koa hoe Andrianamponga II, nanoa. Nalefan’izy mianaka anefa Andrianamponga honina any Ifanongoavana, vohitry ny razany fahiny. Haninona ? Nirahiny izy hampandrendrika vy sy hanao fiadiana sy fiasana amin’ny vy, fa malaza mahay manao izany ny mponina merina amin’iny faritra iny, fahaizana nolovaina tamin’ireo razambe avy any Nosantaria. Ka izany fiasana sy fiadiana vita amin’ny vy nampanamboarin’ny anadahin-dreniny izany no nentin’Andriamanelo nandresy ny Vazimba sy nanitarany fanjakana.
Nanjaka toy ny tompomenakely Andrianamponga II tany Ifanongoavana, ary ny fanjakany dia nolovain’ny taranany nandritry ny 200 taona ka Andriampanarivofonamanjaka no nalaza sy farany tao Ifanongoavana efa taty amin’ny taona 1700 tany ho any. Nony maty Andrianamponga dia nalevina tao Ambohimahatakatra, (misy fasana fahatsiarovana azy - cénotaphe - ao Alasora).
Nony nanjaka Andriamasinavalona, nahare ny lazany sy ny hatsaram-panahiny Andriampanarivofonamanjaka, ka tonga nanoa amin’ny nahim-pony sy nanolotra azy ny fanjakany tany Amoronkay. Faly Andriamasinavalona fa nihitatra ny fanjakany, ka ho marik’izany dia navelany hanjaka teo amin’ny menakeliny ihany Andriampanarivo, nirahany hampandry tany koa ary nomeny an-dRanavalotsimitoviaminandriana anabaviny ho vadiny ka ny zanak’izy ireo dia handova ny fanjakany. Niteraka maro izy mivady ka ny roa lahy dia nanjaka:
Andrianjakavololonandriana tao Ambohitrarivo, nitondra ny fanjakany avaratry ny renirano Varahina, amin’Avaradrano (izany hoe Ivakiniadina-ankehitriny);
Andriantsimitovifonamanjaka kosa tao Ambohitrandriamanitra-Amoronkay, ilany atsimon’ny renirano Varahina. Rehefa voazara roa toy izany ny fanjakany dia napetrany teo amin’ny vohitra kely, amoron’ny rano Varahina Ranavalontsimitoviaminandriana vadiny, hanaramaso an’izy roalahy zanany, fa sady mahatakatra ny any avaratra misy an’Andrianjakavololonandriana no mahatakatra manara-maso ny atsimo, misy Andriatsimitovifonamanjaka. Ka izany hono no nahazoan’ilay vohitra anarana hoe « Ambohimahatakatra ». Io toerana io, ampitan-drano atsimon’ny tananan’ i Mantasoa, dia fivezivezen’ny olona mianatsimo na mianavaratra, ka be androvolahy maditra mpanao barofo sy mpanao fe hariva mety hanakorontam-panjakana ka nilana andriana nifehy sy niandry, ka ny vadin’Andriampanarivofonamanjaka mihitsy no napetrany teo ary mba hotsidihiny matetika koa.
Amin’ny lovantsofina dia misy Ranavalontsimitoviaminandriana roa, ny voalohany, ilay anabavin’Andriamasinavalona vadin’Andriampanarivofonamanjaka, taty Amoronkay-Vakinisisaony izay tantaraina eto, ary ny faharoa ilay zanaka faravavin’Andriamasinavalona, nipetraka tao Anosimanjaka-Marovatana, izay samy voalaza fa reniben’ izy telo mirahavavy vadin’ ny mpanjaka telolahy: Ramorabe vadin’Andriamananimerina, tao Ambohidratrimo, Rasahala vadin’Andriampoinimerina tao Antananarivo, Rasoherina na Rasoherimanantany vadin’Andriambelomasina tao Ambohimanga; izy ireo dia zanaka vavin-dRasoherina reniny, milevina ao Ambohimahatakatra. Samy lazaina fa loharano niavian’ny Andriamanjaka teto Imerina izy ireo. Samy mitana ny heviny koa ny mpitantara momba an’ireo Ranavalontsimitoviaminandriana roa, reniben-dRasoherina. Ka ny an’iza no marina ? Aoka hohajanona eto ny resaka momba izany fa tsy hisy farany, satria mety tsy ho takatry ny fahatsiarovana.
Andrianantsantsa, tompomenakely tao Ambohitrandriamanitra ihany ary koa loharano niavian’ireo andriana tao Imerinarivo, fiavin-drain-dRanavalona III;
Andriamparantsabe, tao amoron’ i Varahina, loharanon’ny andriana amin’ i Mantasoa-Ambohimahatakatra;
Andriamanitrandriana, loharanon’ny andriana amin’ i Miadamanjaka sy Lazaina.
Raha bangoina dia taranaka avy amin’Andriampanarivofonamanjaka sy Ranavalon-tsimitoviaminandriana, ireo andriamasinavalona avy ao Ambohimahatakatra sy ny manodidina rehetra, ary nantsoina hoe « ny zanak’anabavin’Andriamasinavalona ». Araka ny tantara dia ny andriana Razakamanana (1800 ?-1870 ?) no tompomenakely tao Ambohimahatakatra, nanorina an’ i Masombahiny. Niteraka mianadahy izy ka ny vavy atao hoe Ratompo(arisoa) dia nanambady andriamasinavalona tany Marianina, vohitra eo andrefana atsimon’Anosimanjaka ka niteraka an-dRalaiarivony sy Raobelina; ka ity Raobelina ity no fantatra fa nitondra farany tao Ambohimahatakatra.
Ralanimboahangy, zanaka vavimatoan’Andriandanitramantany, mpanjakan’ i Vohitrarivo-Tsinjoarivo, isan’ny 12 vavy vadin’Andriamasinavalona no nanorina azy. Nasain’Andriamasinavalona nianavaratra Ralanimboahangy fa lavitra loatra Tsinjoarivo. « Tsy tamana aho, hoy Ralanimboahangy, raha tsy tanàna mitovy hatsaran-tarehy amin’ny Tsinjoarivo no hipetrahako ! ».
Andramasina no voafidy fa misy fitoviana amin’ i Tsinjoarivo. Efa nisy azimba nonina teo talohan’ny nanorenan-dRalanimboahangy ny tena tanàna ary Ankadimbazimba no anarany talohan’ny nanovana azy hoe Andramasina. Ralanimboahangy anefa toa tsy nipetraka firy teo fa teny Ambohimanjaka-Ambatobe, tendrombohitra avo ambony avaratr’Andramasina, no nonina sy milevina, fa ny taranany no nidina teo ambany atsimo, amoron’ny rano Sisaony.
Nanana zafikely vavy atao hoe Rangory i Ralanimboahangy nandeha nanambady an’Andrianjafindramioro, mpanjaka tao Antongona. Niteraka mianadahy izy mivady dia Andriantsolo sy Ratsiavanga. Nifanaraka izy roa talohan’ny hivadiana fa ny zaza ampy indray mihira dia ho an’Andramasina fa tsy ho an’Antogona. Koa nony maoty izy mianadahy dia nentina tamim-piravoravoana tany Andramasina, nilanonana sy namonoana omby teny an-dalana, ka iray volana vao tonga tany. Niova anarana koa Rangory reniny ka natao hoe Renindrasolo.
Ity Andriantsolo ity dia tonga vadintany nalaza tamin’ny Vakinisisaony tamin’ny andron’Andrianampoina, ary lehiben’Atsimondrano. Nanana lapa roa Andriantsolo dia iray teo an-tampon’Ambohimanjaka natao hoe Tsarasaotra ary ny faharoa tao Andramasina nataony hoe Mandovahasina. Izy no nanao farihy teo amin’ilay lohalokely ao Ambohimanjaka. Ramanjaka no zanany nandova azy, lehilahy nalaza nanome an’ i Tsinjoarivo ho toeram-pitsangatsanganan-dRanavalona I; nefa novonoin’ity izy taty aoriana fa nampangaina ho nitady hamosavy ny Andriamanjaka :
Mpanome amalona amin’ny saron’ankarona ho an-dRanavalona I Ramanjaka, nefa indray mandeha dia nosoloin’ny iraka mpitondra fanomezana teny an-dàlana lohan-tsaka ny amalona izay no nampisafoaka ny andriambavy ka nampamonoiny Ramanjaka. Razafimandimby 14 voninahtra, zana-dRamanjaka no nandimby azy, nalaza fa isan’ny namono nanankenda ho faty an-dRadama II ho toy ny valifaty angamba.
Misy fitenenana hatry ny ela manao hoe: « Ny adin’ny valo-reny, andrianan’Andramasina, dia tsy manam-piafarana ! »
Andranosoalaza, any ambodin’Andringitra, eo am-pita avaratra atsinanan’Ampananina, misy ny taranak’Andriambelanonana, zana-dRamorabe;
Miandrarivo, atsimon’ i Mahitsy, misy ny taranak’Andritomponibemihisatra, zana-dRamorabe;
Antanjondroa (misy ny zana-dRamananadrianjaka sy Rabezaka), Andriantany, Manjakazafy, Ambohipiara, Andambozozoro, Fiakarana, sns …).
Vohitra kely toy ny nosin-drano eo afovoan’ny tanimbarin’ny Betsimitatatra, andrefan’Ambohitrimanjaka ary atsinanan’Ampangabe ity Anosimanjaka ity.
Ranavalontsimitoviaminandriana, zanaka faravavin'Andriamasinavalona, mpanjaka (tsy azo afangaro mihitsy amin’ilay mitovy anarana aminy izay anabavin’Andriamasinavalona ary milevina any Ambohitraina) no nifidy honina sy ho tompom-bodivona teo Aminampanga niova ho Anosimanjaka. Ny mampalaza azy dia Ranavalontsimitoviaminandriana, antsoina koa hoe Inenibe, izay heverina sy inoan’ny ankamaroan’ny olona fa manana hasina manokana, araka ilay tantara somary mifono angano milaza ny fifindrany monina niala avy eny Alasora ka nitetezany ny rano hatreo Anosimanjaka, teny ambony ravitatamo …, sy ny fahagagana fanasitranana sy fiarovana niseho tamin’ireo mangatam-pitahiana aminy. Tsy hamerina izany tantara izany eto akory na hitondra adihevitra ny amin’izany fa ny tiana ho fantatry ny mpamaky dia i Ranavalontsimitoviaminandriana no isan’ny loharano niavian’ireo andriamanjaka rehetra teto Imerina taorian’izy efa-dahy nanjaka, zanak’Andriamasinavalona.
Ranavalontsimitovy dia zanak’Andriamasinavalona sy Ramananandrianjaka ka ny iray tampo aminy dia:
Andriantomponimerina, mpanjaka voalohany tao Ambohidratrimo (ilay naditra) sy
Ramatoanimerina (na Rafotsimifidilahy) nitoetra teny Ambohijanakandriana – Mamioby, niavian’Andriamiaramanjaka, rain’Andrianampoinimerina. Niteraka 9 mianadahy (4 vavy, 5 lahy) izy. Izy dimy lahy no niavin’ireo Andriamasinavalona ao Anosimanjaka antsoina hoe Zanadranavalona.
Ny efa-bavy kosa dia:
1- Ratomponimerimanjaka vadin’Andriantrimobemihisatra, mpanjakan’Ambohidratrimo;
2- Ramanitrandriatsimitovy natao koa hoe Rasoherina reniny, nanambady an’Andriambolanambo tao Namehana niteraka an i:
- Ramorabe, vadin’Andriamananimerina ny mpanjakan’Ambohidratrimo, niavin’ny zanak’andriamanjaka rehetra avy ao;
- Rasoherina, vadin’Andrimbelomasina mpanjakan’Ambohimanga, niavian’ny andriamanjaka nanjaka teto Imerina araka ny tenin’Andrianampoinimerina hoe : « Avy amin’ny tera-dRasoherina irery no angalana izay hanjaka »;
3- Rapapangosasakinivorona, tao Ambohimitsimbina, niteraka an’ i Rasahalarazaka, vadin’Andriampoinimerina, mpanjakan’Antananarivo, loharano niavin’ny andriamanjaka tao, toa an’Andrianambotsimarofy;
4- Razakanavalondralambo, loharano niavian’ny Andriamasinavalona ao Fikarana-Ivato, isan’ny Zanadranavalona. Ny mampalaza koa an’Anosimanjaka dia ny fankalazan’ireo Zanadranavalona isan-taona ny andro fandroana amin’ny tsinambolan’ny Alahamady, manaraka ny fomba teo aloha, araka ny hafatra napetrak’ i Nenibe.
Vakoka tranainy ao Ambodirano Imerinatsimo
Fasan-dakana ao amin'ny Rovan'Antsahadinta
Fasana tranainy (ankavia) ambony vatolampy ao Ivatobe avaratra
Tranomasin'Andriamangarira ao avaratry ny rovan'Antsahadinta
Antsahadinta no isan’ny vohitra malaza ao Ambodirano izay samy misy ny Andriamasinavalona, ny Zazamarolahy ary ny taranak’Andrianampoinimerina avy amin-dRabodozafimanjaka, isan’ny 12 vavy vadiny. Vohitra eo atsimo-andrefan’Antananarivo, vohitra mbola rakotra ala ary voakarakaran’ireo taranaka ka lasa toeram-pitsantsangana mahafinaritra, misy tranom-bakoka.
Araka ny tantara dia Andriamangarira, zanak’olo-mirahavavy amin’Andriambelomasina, no mpanjaka andriantompom-bodivoana nanorina voalohany ny tanàna, nampanao ny hadivory 7 sosona manodidina sy nandrara ny fikapana ny hazo ka nahavoatahiry ny ala manodidina ny vohitra.
Takelaka fahatsiarovana ao amin'ny Rovan' Antsahadinta
Hoy ny tononkira:
« Mananjara samy vohitra Antsahadinta. Ny ora-mirotsaka itoviana ihany, fa ny patrak’ ala vaventy tombondahiny ihany ! »
Tamin’ny taranak’Andriamangarira tao Antsahadinta no fangalan’ny mpanjakan’Antananarivo vady ka nataon’Andrianamboatsimarofy toeram-pamaharana izy satria nisy ny havany.
Andriamaromanompo, zanak’Andrianamboatsimarofy dia nanao toeran-droa fonenany dia Antsahadinta nisy ny renibeny sy Isoananjakana-Anosizato.
Hoy ilay vazaha atao hoe Lebel, mpividy andevo, raha tonga taty Imerina izy tamin’ny taona 1803, nitantara:
«…Nantsoina hifampiraharaha amin' i Ramaromanompo tao Anosizato aho mba hanao vanja. Natao ny fifanarahana teo anatrehan’ny havan’ny mpanjaka dia: ny vadibeny Reniamboa, ny zaodahiny Andriantomponimerina (Dian Tompou Emir) (ndrl na Rabehety, mpanjakan’Ambohidratrimo, afaka nandositra fa tsy novonoina), ny anabaviny Ravao na Ravaonimerina (Raveaux) vadin’Andriatomponimerina, sy Razafinamboa….»
Volana vitsivitsy tato aoriana (Aogositra 1803) maty Reniamboa, vadiben-dRamaromanompo; noararaotin’Andrianampoinimerina izany hanafihana an’Anosizato. Lasa nitsoaka nankeny Antsahadinta i Ramaromanompo sy ny fianakaviany fa mafy fiarovana io vohitra io sady misy ny havany maro be. Nataon’Andrianampoinimerina fahirano Antsahadinta ka 15 andro (tapa-bolana) vao afaka. Afaka nandositra indray Rabehety sy ny havany akaiky, lasa nankany an-drefana any Imamo, fa azo sambo-belona tao kosa Ramaromanompo sy Ravaonimerina, anabaviny, izay nalahelo mafy ny vadiny lasa nandositra; dia nalain’Andrianampoinimerina ho vady indray i Ravao, napetrany tao Antananarivo.
Ny taranak’Andriamangarira sy ny havan-dRamaromanompo kosa dia noroahiny hiala ny vohitra.
Napetrany hitondra sy hiandry fanjakana tao Rabodozafimanjaka, isan’ny 12 vavy vadiny, zanak’Andriantsira, avy eny Alasora ka tao izy mianaka Rakarabo zanany tamin’Andrianampoina no nijaka sy nisaotra omby amin’ny andro Fandroana. Nanomboka hatramin’izay dia i Rabodozafimanjaka sy ny taranany no nanjaka tao Antsahadinta ary milevina ao. Fasana fotsiny sisa ho an’Andriamangarira; ao koa ny an-dRatsimisotry zazamarolahy, ny an’ny terak'Andrianjakatrimo sasany, Andriamasinavalona; ery andrefan’ny tanàna no misy ny fasana nametrahana an’Andrianamboatsimarofy, mpanjaka resy tao Antananarivo sy ny an-dRatsimihara.
Ny andriamanjaka sy ny havany izay nanjaka tany Vakinankaratra nantsoina koa hoe fanjakan’Andrantsay (anarana renirano) fahiny, dia andriana avy aty Imerina ihany ka izany no antony nampidiran’Andrianampoinimerina an’ i Andrantsay ho isan’ny Merina satria vahoaka merina ny ankamaroan’ny mponina tao ankoatry ny tompontany.
Andrianony (na Andrianonifonamanjakatany) sy ireo anabaviny Ramanjaka sy Ramanalina no loharano niavian’ireo mpanjaka tao Andratsay (Vakinankaratra). Havana akaikin’Andriampanarivofonamanjaka tao Ifanongoavana ihany izy ireo na mety ho iraitampo aminy mihitsy aza fa samy taranaka avy amin’Andrianamponga II, anadahin-dRafohy, zana-dRangita Trimovavavy, koa andriana merina izany. Nifanila vodirindrina ny fanjakan’izy roa tonta, Ifanongoavana atsimo, Vatodrangy-Ambohidranadrambo, atsinanan’Ambohimahatakatra, izay faritra lasa difotry ny rano taty aoriana rehefa natsangana ny tohadrano.
Fony Andriamasinavalona nanjaka, dia niainga Andriampanarivofonamanjaka niakatra taty Antananarivo hanoa. Andrianonifonamanjaka mianadahy kosa dia tsy nahatoky loatra an’Andriamasinavalona ka tsy nanaiky ny hanoa fa naleony nifindra monina; nilaozany ny fanjakany izay lasa teo ambany fahefan’Andriampanarivo tato aoriana.
Rahefa niainga izy ireo dia nentiny niaraka taminy ny filohan’ny vahoakany sasany (hova sy menakely), ny angaralahy, ny mpanompo ka nandray ny lalana mianatsimo, nanaraka ny moron’ ala atsinanana, satria tsy nisy olona nanelingelina fa mbola efitra ny toerana. Nivezivezy ela ihany izy ireo nitady toerana honenana: tonga hatrany Kiriiroka any Fisakana, niverina nianavaratra taty amoron’ny renirano Onive, nandalo an’ i Vontovorona, ary farany tody tany amin’ny faritry ny renirano Andrantsay sy Betafo, izay efa nisy ny vazimba Radobay. Nalainy ho sakaiza nefa nofitahan’Andrianony sy novonoiny ity vazimba ka nalainy avokoa ny ody sy ny sampiny, dia azo mora foana ilay faritany ka nanjakany am-piadanana.
Ramanalina vavy lasa nirintona nankany Fisakana fa tezitra sy nalahelo tamin’ny namonoana ampitaka ny osiny ho mariky ny fizarana. Andrianony sy Ramanjaka sisa nifampizara ny fanjakana tao Amboavoa koa:
- Ramanjaka nifidy ny ilany antsinanana, fa toa mandrimandry ny tany: tao Ambohitradrainarivo sy Betafo izy no nonina;
- Andrianony nahazo ny ilany andrefana, somary mafampana fa akaikin’ny sakalava, ary nanorim-ponenanan tao Fiva (Fivavahana).
Zato taona mahery kely taty aoriana rehefa naka an’ i Vakinankaratra Andrianampoinimerina, dia Andrianonitomponitany tao Betafo sy Andriamasindraibe tao Vohimalaza, izay samy taranaka avy amin-dRamanjaka no novantaniny. Izy roa lahy ireo dia tsy nanohitra fa nanaiky ny hanoa, ka tsy nesorin’Andrianampoinimerina tamin’ny fanjakany, ary nataony isan’ny andriamasinavalona, izy ireo sy ny taranany.
Andriamanalinibetsileo kosa, taranak’Andrianony dia tsy nanaiky fa nanohitra sy namaky ady tamin’Andrianampoinimerina, ka nony ela resy dia novonoina ary nofoanana ny vohitra nisy azy. Ny zanany Andriambongo sy Andriamanalimbehiantana anefa dia nanaiky mangina ary toa namadika an-drainy mihitsy aza; dia nomen’Andrianampoinimerina fanjakana ihany izy ireo ary Andriambongo aza dia natao vadin-dRamasindrazana, ka niteraka an-dRamboasalama, izay zaza saika hampanjakain-dRanavalona I, rahavavin-dreniny, handimby azy.
Andriantsileondrafy zanak’Andrianonitomponitany tao Betafo no natao lehiben’ ny andriana amin’ i Vakinankaratra manontolo ary izao avy ireo Andriamasinavalona, tompomenakely tao Vakinakaratra, avaratr’ i Mania:
Andrianonitomponitany, tao Betafo;
Andriamanalina tao Manandona;
Andriamasindraibe, tao Antsirabe;
Andriambongo mirahalahy tao Imenabe Iarivo;
Andriamaroanaka tao Ambohitrandraina.
Ranavalona anabavin’Andriandahimbolamena, tompomenakely tao Ambohijanaka-Vakinisisaony dia nanambady an’Andriamanalina, mpanjaka tao Manandona (Ambohiponana), zanak’Andriamasindraibe ihany, isan’ny mpanan-karena nanefoefo indrindra tany Vakinankaratra: izany no nisian’ny fihavanana akaiky amin’ny andrianan’Ambohijanaka sy Manandona.
Rehefa azo sy nanaiky i Vakinankaratra, dia nampiana an’ireo fanjakana rehetra tamin’ny vakin’ i Mania sy Vakin’ i Matsiatra, hatrany Tsienimparihy atsimo satria ireo mpanjaka izay nanaiky ny hanoa an’Andrianampoinimerina dia nijanona ho mpanjaka teo amin’ ny fanjakany ihany saingy nampitoviana fitondrana tahaka ny menakely Ireo nanohitra ka resy dia nalaina ny fanjakany natao « Menabe » fehezin’Antananarivo mivantana na natambatra amin’ ny fanjakana iray ao Vakinankaratra.
Fisakana, fanjakan-dRarivoekembahoaka, nanohitra ka resy: niala tamin’ny fanjakany;
Manandriana, fanjakan’Andrianatara, nanoa, ka nijanona amin’ny fanjakany ihany;
Isandra, fanjakan-dRajoakarivony, nanoa ka nijanona amin’ny fanjakany ihany;
Ilalangina, fanjakan’Andriambavizanaka, nanoa ka nijanona amin’ny fanjakany ihany;
Itsienimparihy, fanjakan-dRarivoarindrano, nanoa ka nijanona amin’ny fanjakany ihany. Midadasika tokoa ny faritr' i Vakinankaratra fa ny farany avaratra dia Rangaina - Onive (Antanifotsy) ny atsimo Tsienimparihy (Ambalavao), ny atsinanana ny ala, ny andrefana ny fanjakan'ny Sakalava Menabe. Nizara roa i Vakinankaratra dia:
Ny Andafiatsimonimatsiatra: Tsienimparihy, Ilalangina, Isandra;
Ny Andafiavaratrimatsiatra - Manandriana (hatreo Ivato no mianatsimo);
Ambohitsimanova atsinanana: hatreo Ambohijafy miatsinanana hatrany amin’ny Zafimaniry, hatreo Rangaina-Onive mianatsimo ka hatrany Ivato;
Ambohitsimanova andrefana: Ambohijafy miakandrefana hatrany an-tsakalava. Betafo ihany anefa no foiben’ i Vakinakaratra manontolo.
Rehefa vita Vakinakaratara manontolo dia nitodi-doha nianavaratra nody ny tafika; nony tonga teo Ambohipeno (tendrombohitra atsimo-atsinanan’Ambatolampy ankehitriny, amoron’ i Onive) dia nitodika tamin’ireo zana-dRangorinimerina fito lahy Andrianampoinimerina satria izy ireo no tena nifikitra sy nanao izay ahazoana an’ i Vakinakaratra tamin’ny tetika sy tamin’ny fifampiraharahana na tamin’ny ady ka nahafam-po ny andriamanjaka ary novaliany soa. Dia nomeny azy ireo ho menakely sy ifampizaran’izy ireo ny tany teo anelanelan’ i Vakinankaratra sy Ambodirano ary Vakinisisaony, hatreo Ihazolava no mianatsimo hatrany Rangaina-Antanifotsy, ka ipetrahan’ireo taranany hatramin’izao.
Renivohitry ny toko Vakinankaratara izy. Ny anarany hono, dia avy amin’ny hoe Be-eto-afo (Be setrok’afo) satria tanàna be trano madinika midonan-tsetroka izy fehizay, fa nisy vahoaka (menakely, andevo) mpiandry ny Vohiambo (fasan’andriana) izay ilevenan’Andrianonitomponitany sy ny taranany; nantsoina koa hoe « Itsaravavaka » ny fasany, araka ny firarian’Andrianampoina izay nanenina mafy tamin’ny nampamonoana azy tsy ara-drariny ka nanao hoe: « Mba ataovy tsara vavaka re izaho sy ny taranako, ry Andrianonitomponitany ô ! Fa aza manody izany voafitaka ! ». Ambohitsimanova dia tanàna kely eo avaratry ny farihy Tatamarina. Tamin’ny Merina « lavasofina » naka an’ i Vakinankaratra, dia tsy mba nanohitra i Betafo; ka teo amin’io toerana io no nanao velirano ny andaniny roa: Andrianampoina nanome toky fa tsy hanova ny fitondrana ary tsy hanetry razana; teo andaniny indray Andriantsileondrafy, zanak’Andrianonitomponitany, nisahàto fa hanoa an’Andrianampoina ka tsy hanova izany izy sy ny taranany. Tonga toerana fisehoan’ny andriana teo sy fivorian’ny ambanilanitra amakiana ny kabarin’ny mpanjaka, ary lasa toerana fanaovan-dalonana. Itatamarina dia ilay farihy ao atsimon-tanàna, laza manokan’ i Betafo. Natahorana izy tany aloha fa rehefa hisy hiamboho hono ireo andriandahy lehibe ao Betafo dia mivadika maloto toy ny misy taim-boraka ny rano ka dia Andranomilalahy no natao anarany fony izy mbola kamory kely. Andrianonitomponitany no nanamboatra azy ho tonga farihy lehibe niaraka tamin’ireo hady fito sosona ka sady lasa fatsakana izy raha misy fahirano no manda fiarovana avy eo atsimon-tanàna.
Aiza moa no misy an’ i Vonizongo? Hatreo amin’ny renirano Moriandro, mandalo ny tanànan’ i Mahitsy no miakandrefana-avaratra, ka hatrany Andriba no faritra misy azy.
Mitovitovy amin’ny distrikan’Ankazobe ankehitriny. Izany atao hoe Andriamisavalambo (I) izany no mpanjaka voalohany tany, niara-belona tamin-dRalambo sy Andrianjaka. Nalaza ho nahery nandeha izy izany, ka tanàna roa mifanalavitra dia tratrany indray andro, samy isaorany omby amin’ny andro Fandroana. Ratsy fitondra vahoaka anefa izy ka tonga halan’ ny olona. Izy koa no voalaza fa nahita voalohany ny tangena ka nanorina ny fampinomana amin’io poizina io ho fitsarana, ka izay resy sy maty dia nobaboina ny fananany. Noho izany rehetra izany dia nangidy hoditra tamin’ny vahoaka Andriamisavalambo. Dia niainga Andrianentoarivo sy ny loholona 10 lahy sy vatan-dehilahy 40 sy vahoaka sasany ary Ravonizongo teo Lohavohitra mba hanafika an’Andriamisavalambo. Resy tao Andriba Andriamisavalambo ka novonoina tao Ambohitromby. Lasan’Andrianentoarivo ny fanjakany ary natao hoe Maromadinika ny vahoakany.
« Tsy avelako tsy ho vary io any am-parany any ! »
Dia nihady an’Ankadimbahoaka Andrianjaka, hadi-tany voalohany nampanaoviny ny vahoaka ho fefiloha ka izay no nanaovana azy hoe « Ankadimbahoaka ». Samy nanao avokoa ny Ambaniandro sy ny havan’andriana, ary nandraharaha teo Andriantompokoindrindra sy Andrianjaka.
« Aza maka ny misy tany fa ny misy vato alaina »
hoy Andriantompokoindrindra tamin’Andrianentoarivo. Ary nokapohin’Andriatompokoindrindra Andrianentoarivo, ka hoy izy taminy:
«Ty tsy mba mahavita ny anjarany ! »
hoy izy. Nitomany Andrianentoarivo namaly:
« Vato ka ataoko ahoana ! »
Kanjo hevitra iraisan’izy raolahy izany ny mba hanomezan’Andrianjaka an’ i Lohavohitra ho an’ Andrianentoarivo. Nony indray andro, tafahoana teny Andringitra Andrianjaka sy Andrianentoarivo sy ny vahoaka manaraka andriana. Ary hoy Andrianentoarivo tamin’Andrianjaka:
« Aoka mba honenako ity Lohavohitra ! Honeno ! »
« Ary manao ahoana ny vodihena ? Fandrao misy hadino ka mahadiso ? »
« Izay hanin’ialahy koa haninona, ny ahy atero ! »
hoy Andrianjaka. Dia nandeha Andrianentoarivo nankany Lohavohitra. Ary taty aoriana indray dia niakatra taty Antaninarivo izy nangataka an’i Babay, dia hoy Andrianjaka:
« Lohavohitra lasan’ialahy ! Ka dia alain’ialahy indray Babay ! »
« Ka fanjakanao ihany anie, hoy izy, tany ampandriko ho anao ! »
Dia nanao orimbato izy roa lahy teny Andringitra ho fanamafisana izany. Koa rehefa nitoetra teo Lohavohitra Andrianentoarivo dia nampanaiky an’ i Vonizongo manontolo. Niteraka roa lahy Andrianentoarivo dia Andriamosanja sy Andriampimanjaka, izay nizara ho roa an’ i Vonizongo ho atsimo sy avaratra. Ny taranak’izy roa lahy ireo no tompom-bodivona sy menakely tamin’iny faritra avaratra-andrefan’Imerina iny.
Ary nony tamin’ny andron’Andrianampoinimerina nampandry an’ i Marovatana-Ambohidratrimo, dia tonga tamin’ny nahim-pony ny iraka avy amin’ireo terak’Andrianentoarivo-Vonizongo nilaza tamin’Andrianampoina nanao hoe: « Avy manaiky ho zanakao izahay, fa mandre ny teninao hoe hampiadana ny vahoaka…! »
Dia faly ny mpanjaka ka ho valin’ny faneken’izy ireo dia tsy nesoriny fa napetrany tamin’ny vodivona nisy azy ireo tsirairay avy; ary ireo zanak’Andrianentoarivo nataony ho isan’ny Andriamasinavalona, nomeny elomena isan-dahy. Nozarainy folo araka ny isany i Vonizongo ka Andriantsimidodò sy Andriantsoba no natao ho isan’ny filohany tamin’izany.
Betsaka mihitsy ireo vohitra nisy ny terak’Andrianentoarivo, Andriamasinavalona amin’ny Vonizongo saingy tsy dia nisy nahazoana tantara firy ary efa lasa haolo aza ny sasany na niova anarana taty aoriana. Ny hany nahazoana tantara kely dia Ambohimirimo, ao amin’ny zarantanin’ i Tsaravoninahitra.
Ambohimirimo (na Mananjara ankehitriny) dia ilay vohitra mifono ala tazana ery andafy andrefana atsimon’ i Mahitsy (Lalam-pirenena faha-4) ampitan’ny renirano Moriandro.
Andriandambofontany nitondra an’ i Tsaravoninahitra no andriana nandimby fanjakana tao Ambohimirimo tamin’ny andron’Andrianampoina; ary izy sy ny razany: Andriampitsaikarivo, Raoniambato ary Raoniambatomandimby rainy no milevina ao.
Taty aoriana dia napetrak’Andrianampoina teny Rasoamananoro zanany, reni-dRamasy. Nony niamboho anefa Radama I tato aoriana dia natolo-dRanavalona I ho an-dRamboasalama zana-drahavaviny Ambohimirimo, ka izy no andriana tompombodivona tao hatramin’ny nahafatesany. Andriantasy mianadahy, zana-dRamboasalama dia manana fasana ao ilevenan’ny taranany. Nisy rova sy lapa tsara tarehy tao, hono, misy amontana sy aviavy ka nahaloa-bolana ny ntaolo hoe:
« Mananjara izay monina ao »; koa izay no niavian’ny anarany ankehitriny hoe « Mananjara ».
Tsy natao isan-toko fa natambatra manontolo amin'Ankibonimerina 4-toko ka dia niray Imerina sy Imamo.
Andriambahoaka rainy no mpanjaka lehibe voalohany fantatra tany Imamo ary Manazary no renivohitra. Andriambahoaka II na Andriambahoakafovoanitany, zanany, izay niara-belona tamin’Andriamasinavalona no nandimby azy ka nanorina ny renivohitra tao Amboniazy, nosy kely eo atsinanan’ny farihin’Itasy, izay misy ny fasana ilevenany ankehitriny. Nizara roa Itasy tamin’izy niamboho:
Imamo Atsinanana (Ambohitrambo, Ambohibeloma, Arivonimamo, Ambatolevy) nanjakan’Andriampivoanandriamanitra, zanany lahitokana);
Imamo andrefana (Manazary, Ambohitrondrana) nomeny an’Andriampanarifito, zanak’anabaviny.
Andriamarimampihovohovo, zafiafin’Andriampanarifito, nanjaka tao Ambohitrondrana. Tamin’Andrianampoinimerina nanafika farany an’Antananarivo dia lasan-ko babo ireo zanaka roa vavin’Andriamary, saika ho vadin’Andriamboatsimarofy tao Antananarivo. Navotan’Andrianampoinimerina anefa izy roa vavy ka nampanateriny tany amin’ny rainy tany Ambohitrondrana. Faly tokoa Andriamary nahita ireo zanany voavotra, ary niaiky ny hatsaram-pon’ilay mpanjakan’Ambohimanga, ka niantso ny vahoakany izy nilazany hoe:
« Ambohimanga isika rehetra na hiafarana na hialohana ! »
« Anao ny fanjakana, fa zanakao aho! Koa raha tsy ovanao amin’ny ipetrahana, dia toky no omeko anao ! »
« Sitraka sy telina izany ! Matokia kosa ianao, fa tsy ovako amin’izay tany ipetrahanao ianao…»
Taty aorina niainga Andriamary, niakatra aty Ambohimanga, nielo mena narahin’ny vahoaka, ka tsinjon’Andrianampoinimerina tery Mangabe: ka hoy izy:
« Iza kosa io mielo mena io ? Fahavalo sa avy hanatsara ny tany ? Handeha hanatona eny aho fa tsy misy tompon’ny elomena fa izaho no tompony. »
Dia nandeha Andrianampoinimerina nilanja basy, ka nony teo antenatenany, dia hoy Andriamary:
« Apetraho ny basin’ialahy, fa vita ny fanjakan’ialahy ! »
Dia napetrak’Andrianampoinimerina ny basiny dia hoy izy:
« Ho avy hanatsara ny fanjakako ialahy ? »
« Izany no nitondrako ity elo ity, hoy Andriamary, hampandry ny fanjakan’ialahy, dia matokia ialahy ! »
« Lehilahy manao soa ahy ianao Andriamary !, hoy Andrianampoina...., haniraka olona isika avy any andrefana sy avy atsinanana, ka izay ifanenany, ny andrefana anao ary ny atsinanana ahy ! »
« Matokia Andrianampoinimerina, fa na iza hivadika na iza hivadika, izaho tsy mba manam-pamadihana mandrakizay doria…! »
Raha manao izany ialahy, hoy Andrianampoina, tsy mba ovako ny fitiavako an’ialahy mandrakizay doria; fa an’izay naterak’ialahy na zafiafin’ialahy i Mamo mandrakizay doria ! Ary aza malahelo momba ahy fa tsy ataoko resy lanja nohon’ny sasany !...». Dia nampifanambadiana ny zanak’izy roa lahy sy ny fianakaviana roa tonta.
Andriampoetsakarivo sy Andriamarobasy tao Imamo atsinanana kosa nanondro basy nanohitra an’Andrianampoinimerina; tsy nety nanoa nefa resy ka novonoina. Andrianamborinandriamanitra mirahalahy avy sy ny zanak’izy roalahy ireo anefa tonga nanaiky an’Andrianampoinimerina ka tsy novany sata; rehefa azo Imamo atsinanana dia nakambana amin’Ambodirano sy Marovatana tato aoriana. Ny taranak’Andriamary irery ihany no natao « Zazamarolahy », fa ny sisa dia nijanona ho Andriamasinavalona.
Radama nanambady an’ i Ravao sy Ramoma, zanak’Andriamary (Ravao nisaorany ka nanambady an-dRamanetaka taty aoriana);
Rabodosahondra anabavin-dRadama nanambady an-dRatefinanahary, zanak’anabavin’Andriamary;
Ratsiadala, anabavin-dRadama nanambady an-dRahanety, zanak’Andriamarobasy;
Razaka Ratrimo, zanak’anabavin’Andriamary nanambady an-dRamasindrazana ka niteraka an-dRamoma (mianadahy avy) na Ranavalona II mpanjaka.
↑ Pierre Razafimbelo (1911), « Tantaran'ny andrianteloray », Fanontana manokana - Antananarivo.
↑ Ravelojaona (1937), « Boky firaketana ny fiteny sy ny zavatra malagasy (Dictionnaire encyclopédique Malgache). Avoakan'ny Mpiadidy ny Fiainana », Imp. industrielle - Antananarivo.
↑ Thomas Rakotoarivelo & Solonavalona Andriamihaja (2014), « Andriamasinavalona, Mpanjaka tokana teto Imerina (1675-1710) », Fanontana manokana - Ny fikambanana « Taranak'Andriamasinavalona », Antananarivo.
↑ Rabarijaona (1938), « Rakitry ny ela sy Généalogie mikasika ireo taranaka: Andriamasinavalona na: Andrianjakanavalondambo na: Razakalambonavalona mpanjakan'Imerina (1675-1710) sy Andriambahoakafovoanintany mpanjakan'Imamo », Lovan-tsofina voarakitra an-tsoratra noraisina avy amin'ny Mpitandrina fiangonana kristianina iray tao Ambodirano Imerinatsimo, Ambohimahamanina.
↑ Thomas Rakotoarivelo (2003), « Ny ketsa mahafehy tena », Fanontana manokana - Antananarivo.
↑ Thomas Rakotoarivelo (2005), « Ny tantaran'Andambozozoro (vohitr'Andriana ao Marovatana) - Andriandambozozoro sy ny taranany », Fanontana manokana - Antananarivo.
↑ Foiben'ny Arsivam-pirenena (1840), « Archive royale », MM1, NN21-21, PPI, Repoblikan'i Madagasikara, Tsaralalàna - Antananarivo.
↑ François Callet (1908), « Tantara ny andriana eto Madagasikara (histoire des rois)», Antananarivo: Imprimerie catholique.
↑ Claudie Razafintsalama (2013) , « Ambohimahatakatra-Mantasoa » , Fanontana manokana - Antananarivo.
↑ Thomas Rakotoarivelo (2016), « Andriamangarira tao Antsahadinta sy ny Zanamangarira, Andriampakatro sy ny taranany », Fanontana manokana - Antananarivo.
↑ Jean Claude Hebert (1804), « Les tribulations de Lebel « Negociant - voyageur » sur les hauts-plateaux Malgaches (1800-1803) », In « Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) », Revue d’études historiques, Volume 10, Jolay - Desambra 1979, Oniversitean'i Madagasikara - Antananarivo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriamasinavalona&oldid=1044588"
Voaova farany tamin'ny 15 Aprily 2022 amin'ny 12:55 ity pejy ity.